YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, June 25
ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်း ဆုံရာတွင် ထားရှိသော လူကူး ဂုံးကျော်တံတားတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ် လောက်ကပင်စပြီး ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်မှာ ယခုထိပင်မပြီးသေးသည်ကို တွေ.ရှိရသည်။ ထို.အပြင် ထိုပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အကာအရံ တစ်စုံတစ်ရာထားရှိခြင်းမရှိ၊ တံတားတစ်ဖက်တွင် နောက်ထပ် တက်လမ်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် ထိုတက်လမ်းကို ထောက်ရန် တိုင်နှစ်ခုကို ဒေါက်အဖြစ်အသုံးပြုထားပြီး ထိုဒေါက်များသည် မြေကြီးများကိုသာ အားပြုထားသည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ ထိုတက်လမ်းတည်ဆောက်မှုတွင် ဂဟေစော်မှုများပြုလုပ်ရာမှ ကျဆင်းလာသော မီးပွားများသည် လမ်းသွားလမ်းလာအနီးသို. အကာအရံမဲ့ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ထို.အပြင် ဒေါက်တိုင်များသည် ယခုအချိန်ထိ မပြိုလဲတစ်ဖြင့် ခိုင်မာသည်ဟု ပြောနိုင်သော်လည်း လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သတိ ဟု အစချီပြီးရေးသားနိုင်သော သတိပေးစာတစ်စုံတစ်ရာပင် ကပ်ထားခြင်းအလျှင်းမရှိသည်ကိုလဲ တွေ.ရှိရပါသည်။ ထို.အပြင် ထိုတံတားအလယ်တွင် လက်ကိုင်တန်းတစ်ခု ဂဒေဆက်ရာနေရာမှ ပြိုထွက်ကာ လဲယိုင်နေသည်ကိုလဲ တွေ.ရှိရပါသည်။ လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်မှစပြီး ဆူးလေဘုရားလမ်းကို ဖြတ်ကူးခြင်းကိုလဲ ပိတ်ပင်ထားသည်ကို တွေ.ရပါသည်။ ထို.ကြောင့် လမ်းသွားလမ်းလာများ ဖြတ်ကူးမှု များသောအချိန်တွင် ကသိကအောက်ဖြစ်မှုများ ရှိပြီး တံတားမှာလဲ ကျဉ်းမြောင်းလှပြီး ခိုင်ခံ့မှုမှာ အထက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် မေးခွန်းထုတ်စရာများဖြစ်နေပါသည်။
ထိုနေရာသည် လူသွားလူလာ အလွန်ထူထပ်သောနေရာဖြစ်သဖြင့် ထိုတံတားကို အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးမြောက်ပါစေလို. ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျား။
BY YeYint Nge ... 6/25/20090comment
Amnesty International Canada is working onapetition calling for an immediate and unconditional release of Burmese democracy leader Daw Aung San Suu Kyi. If you have not signed the online petition yet, here is the link.
Please also forward this link to your colleagues and friends, urging them to do the same thing.
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 25 2009 13:33 - မြန်မာစံတော်ချိန်
Thursday, 25 June 2009 17:38 အဲလက်(စ်) အဲလ်ဂီး
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်အတွင်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီး ကရင်ဒုက္ခသည် ၃,၀၀၀ ကျော်လည်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးခိုလှုံ လာကြရသည်။
ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များသည် သူတို့လူထုအတွက် ယခုကဲ့သို့ထွက်ပြေး၍ ခိုလှုံကြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည့် အနေ အထားမှာ မလွယ်ကူလှပါ။
"ရွာတွေကို ထားရစ်ခဲ့ရတာ ၀မ်းနည်းစရာ သိပ်ကောင်းတယ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ၀မ်းနည်းဝမ်းနည်းပေါ့၊ နောက်ဆုံးတော့ စွန့်ထားခဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတာပဲ၊ အခု တိုက်ပွဲတွေက ပိုလို့ အန္တရာယ်ကြီးလာတယ်"ဟု ပုံညာကျိုးကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
သူစကားပြောနေစဉ်၌ပင် မော်တာသံ၊ စက်သေနတ်သံများ တောင်ကြောတလျောက် ပဲ့တင်ပြန်နေသံကို ကြားနေရသေး သည်။ ဤဒေသများက ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) ၏ နှစ် ၆၀ ကျော် တော်လှန်စစ်အတွက် နောက်ဆုံး ခံကတုတ်ဒေသများ ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လည်း အပြင်းအထန် ခုခံနေကြသည်။
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် သူတို့နှင့် မဟာမိတ်ပြုထားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့(DKBA) ၏ တပ်များက အလျင်အမြန်ထိုးစစ်ဆင်လာသောကြောင့် ယခုလို သူ၏ကျေးရွာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးရန် ဆုံးဖြတ် ချက်ချ ခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယခင်ကလည်း ကျေးရွာလူထုကို ပေါ်တာခေါ်၍ စစ်ပွဲအတွင်း ပစ္စည်းသယ်ဆောင် ထမ်းပိုးရန် စေခိုင်းခံခဲ့ကြရပြီး ယခုတကြိမ်တွင်တော့ အသက်ကို အရဲကိုး၍ နေထိုင်ရန်၊ အဖမ်းခံရန် မဖြစ်နိုင်ကြ တော့ပါ။ သို့ အတွက်ကြောင့် အဝေးက မော်တာသံကြားသည်နှင့် သူက ရွာကိုပြောင်းရွှေ့စေရန် အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့ ဆက်နေလို့ မရတော့ဘူး၊ အကယ်၍ ဆက်နေရင်လည်း ဖမ်းပြီး ပေါ်တာထမ်းခိုင်းမှာပဲ"ဟု ရွာသားတဦးက ပြောသည်။ သူက ယခင်ကလည်း မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်း၍ တောတောင်ထဲ ပေါ်တာထမ်းခိုင်းသည်ကို ကြုံခဲ့ရဖူးသူ ဖြစ် သည်။
"မြန်မာစစ်တပ် တပ်မှူးတွေက ဘုရင်လိုနေတာ၊ ကျန်တဲ့ ကျနော်တို့ကိုတော့ တိရစ္ဆာန်တွေလို သဘောထားတာ"ဟု သူ၏ အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြသည်။ စစ်တပ်စခန်းတွင်း သူနေခဲ့ရစဉ်က အစာငတ်၊ ရေငတ်သည်ကို ၃ ရက် ကြုံခဲ့ရဖူးသည်။
ထွက်ပြေးကြရသည့် နောက်အကြောင်းတခုမှာ DKBA အဖွဲ့က စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံရမည့် အရေးကို စိုးရိမ်နေသော ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါက ရှေ့တန်းတွင် တိုက်ခိုက်ရန် စစ်သားများ ပိုမို လိုအပ်လာမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး သူတို့ကိုပါ စစ်ပွဲတွင်း တိုက်ခိုက်ရန် အဓမ္မခိုင်းစေလာဦးမည်ဟု မြင်နေကြသည်။ ကျေးရွာသား အများစုက ဤသို့ မလုပ်ဆောင်လိုကြပါ။
"ကျနော်က ကိုယ့်ကရင်လူမျိုး ညီအစ်ကိုတွေကို သတ်ဖို့ မြန်မာ စစ်တပ်အတွက် စစ်တိုက်ပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာဘဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျနော်တို့က DKBA အတွက် စစ်တိုက်ပေးနိုင်မှာလဲ"ဟု ရွာသားတဦးက ဒေါသဖြင့် မေးခွန်းထုတ်သည်။
မြန်မာစစ်တပ်က ပေါ်တာဖမ်းဆီးခံရသည့် ရွာသားများကိုလည်း လူသားမိုင်းရှင်းကိရိယာများအဖြစ် သုံးသည်ကို ကြုံခဲ့ကြရ ဖူးသည်။ မြန်မာစစ်တပ်က အကယ်၍ မိုင်းများနင်းမိပါက သေကြေအောင် ရှေ့တန်းတင်စေလွှတ်တတ်ကြသည်။
"မြန်မာစစ်သားတယောက်က ကျနော့်ကို ရှေ့ကနေ မိုင်းရှင်းဖို့ သွားခိုင်းဖူးတယ်"ဟု ရွာသား တဦးက ပြောသည်။
"ကျနော်တို့က ကရင်စစ်သားတွေနဲ့ နီးလာတော့ သူက နောက်မှာနေပြီး၊ သေနတ်ကို ကျနော့်ပခုံးပေါ်ကနေ ကျော်ပြီး ချိန်ထားတယ်၊ တကယ်လို့ တယောက်ယောက်က ပစ်ရင်တော့ ကျနော်တော့ သေပြီပဲ"ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဤသို့ အန္တရာယ်များ ကြုံရနိုင်သော်လည်း ရွာကိုစွန့်ခွာဖို့ ဆိုသည်မှာ လွယ်ကူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ မဟုတ်ပါ။ ရွာသား အများက သူတို့လယ်ယာများအတွက် ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကြရပြီး သူတို့လုပ်အား၏ အသီးအပွင့်ကို ခံစားရရန် လည်း စောင့်မျှော်လိုကြသေးသည်။
"ကျနော်တို့က သရက်သီးတွေ မှည့်လာတဲ့အချိန် စားရဖို့အထိ လပေါင်းများစွာ စောင့်နေရတာ၊ အခုတော့ ချန်ထားရစ်ခဲ့ရ တယ်"ဟု ရွာ ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
ခရစ်ယာန်သာသနာပြုများက ဆယ်စုနှစ်များစွာ သာသနာပြုခဲ့ကြသော်လည်း ကရင် ကျေးရွာသားအများစုက ယခုတိုင် နတ်စားသည့် ဓလေ့ကို ဆက်လက်ယုံကြည် ကိုးကွယ်ဆဲ ဖြစ်ကြသည်။ နတ်စားသည့် ဓလေ့ရှိကြသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် ကြောင့်လည်း ကျေးရွာတ၀ိုက်ရှိ တောတောင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ မြစ်များ၊ ချောင်းများသည် သူတို့အမည်နာမ ရှိသလို၊ အသက်ဝိညာဉ်ရှိသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ထားကြသည်။
"သူတို့တတွေက ဘ၀တလျောက်လုံးမှာ ဒီဝိညာဉ်တွေကို သူတို့ကို လုံခြံမှုပေးဖို့၊ ကာကွယ်ပေးဖို့ ရှိခိုးလာကြတာ"ဟု ကရင် လူငယ်အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောပြသည်။
"ဒီရွာတွေကို စွန့်ခွာသွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် အသက်ဝိညာဉ် ဆုံးရှုံးကြရသလိုပဲ၊ ၀ိညာဉ်တွေက လူကို သတ်စေ၊ သေစေ နိုင်တယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြတော့ သူတို့အတွက် ပိုလို့ ကြောက်ရွံ့စရာ ဖြစ်နေကြတာပေါ့"ဟု သူက ဆက် ရှင်းပြသည်။
ရွာသားများက တောလမ်းတွင် ၃ ရက်ကြာ လျှောက်ခဲ့ကြရသည်။ စစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသအတွင်း နေရာအနှံ့အပြား ရှိနေ ကြ သည့် မြေမြုပ်မိုင်းများကို ရှောင်ကွင်းလျှောက်လာကြရသောကြောင့်လည်း ပို၍ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
"အကယ်၍ မိုင်းမထိဘူးဆိုရင်တောင်မှ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်တာတွေ၊ မြွေကိုက်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ရှိတယ်"ဟု ရွာ ခေါင်း ဆောင်က ပြောသည်။
"မိန်းမတွေ၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သွားကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အခုလို ဆုံးဖြတ်ရတာက လွယ်လှတာမဟုတ်ဘူး"ဟု သူက ဆိုသည်။
သူတို့က မြစ်ကမ်းပါးရောက်သည့်အခါ လှေဖြင့် KNLA တပ်များ၏ တပ်မဟာ(၇) ဌာနချုပ်ဘက်မှနေ၍ ထိုင်းတဖက်ကမ်း မဲဆလစ်သို့ ကူးကြသည်။ တဖက်ကမ်းရောက်သည့်အခါ ရွာသားများက လူဖြန့်ခွဲ၍ ယခင်က ရောက်ရှိအခြေချနှင့် ပြီးသား ကျေးရွာများတွင် ခိုလှုံနေကြရသည်။
တဖက်ကမ်း ရွာများသို့ ရောက်သည့်အခါ ခရီးကြမ်း တလျှောက် ဖြတ်သန်းလာရမှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြသူများ၏ အ၀တ်အစားများက စုတ်ပြတ်ပေရေနေပြီ ဖြစ်သည်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ကောက်ယူစုဆောင်းရန် အချိန်မရခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း ယခုအခါ လဲလှယ်ဝတ်စရာ အ၀တ်အစား မရှိဘဲ ဖြစ်နေကြသည်။
ဤသို့ ဒုက္ခရောက်ကြရသည့် အခြေအနေကို သိရှိကြသည့် ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWO) အဖွဲ့က ဒေသအတွင်း ရှိ အိမ်များမှ အ၀တ်အထည်များစုဆောင်းကာ၊ ဒုက္ခကြုံလာရသူများကို နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စုစည်းနေရာချ ထားပေးကြသည်။ နိုင်ငံခြားအလှူရှင်များက ပေးကမ်းလာသည့် အ၀တ်အသစ်များ ပေးသည့်အပြင် သူတို့ခံစားခဲ့ကြရ သည့် ဒုက္ခများကိုလည်း ကရင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက မေးမြန်းစုံစမ်းကြသည်။
"ကလေးငယ်တွေနဲ့ အမေတွေ အများကြီးပဲ၊ သူတို့ ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ ဒုက္ခမရောက်သင့်ပါဘူး"ဟု ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး နော် ဘလူမင်း နိုက် က ပြောပြသည်။
ယခု ကျေးရွာမှကလေးများနှင့် အခြားဒေသတွင်း ကျေးရွာများမှ ကလေးများအနေနှင့် ထိုးစစ်သည် သူတို့ဘ၀အတွက်
အမှတ်အတေး စွန်းထင်းကျန်ရစ်စေတော့မည် ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှ စတင်ဖွင့်ခဲ့သည့် ကျောင်းများ၊ အလှူရခဲ့သည့် သင်ကြားမှုထောက်ကူပစ္စည်းများ ချန်ရစ်ခဲ့ကြရပြီ ဖြစ်သည်။
"ကလေးတွေက အခုမှ ကျောင်းဖွင့်ခါစ ရှိသေးတယ်၊ အခု စစ်ကြောင့် သူတို့ပညာရေးတွေလည်း ထိခိုက်ရတော့မယ်"ဟု တပ်မဟာ(၇) မှ ပညာရေးတာဝန်ခံက ရှင်းပြသည်။
ဘားအံခရိုင်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းတခုကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၈၉ ဦးနှင့် ဆရာ/ ဆရာမ ၇ ဦးမှာ တောတောင်များအတွင်း ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရသည်။ အရေးပေါ် ပြေးလာရသည့်အတွက်ကြောင့်လည်း ကလေးများက မိဘများနှင့် ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံချိန် မရခဲ့ကြပေ။ တောတောင်များကို ဖြတ်၍ ထွက်ပြေးလာကြရပြီး နောက် ဆုံး လုံခြုံရာနိဗ္ဗာန် (Safe Heaven) ဟု အမည်ရသော မိဘမဲ့ကလေးများ ခိုလှုံရာဌာနတခုသို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ကလေး ၉ ဦးမှာ ငှက်ဖျားရောဂါ ခံစားနေရပြီး ကလေးများက မိဘများနှင့်လည်း အဆက်အသွယ် ပြတ်နေကြသည်။ သူတို့ မိဘများကိုယ်တိုင် သေသည်၊ ရှင်သည် မည်သို့ အခြေအနေရှိနေသည်ကို သတင်းမသိရှိရဘဲ ဖြစ်နေကြသည်။
"သိပ်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်၊ ကလေးမိဘတွေက ဖြစ်နိုင်တာက ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အထဲ ပါသွားဖို့ များတယ်" ဟု မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး တာ့စနီ (Tasanee) က ပြောပြသည်။
၎င်းမိဘမဲ့ ကလေးများဂေဟာက ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် တာ့စနီ၏ မိခင်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး စစ်အတွင်းမှ ထွက် ပြေးလာကြရသည့် ကလေးများခိုလှုံနိုင်စေရန် ဖွင့်ထားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းနှင့် ကျောက်ဆောင်များ အကြားတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ယင်းမိဘမဲ့ကလေးများ ဂေဟာသည်ပင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာ ဒေသများနှင့် မဝေးလှဟု ဆို နိုင်သည်။ လက်နက်ကြီး မော်တာသံများက ကလေးများ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ သင်ကြားနေမှုကို တခါတရံ အနှောင့် အယှက်ပေးတတ်သေးသည်။
"မော်တာသံကြားတော့ ကလေးတွေက သီချင်းဆိုနေတာ၊ ပျော်ရွှင်နေတာလည်း ပျောက်သွားတယ်၊ သူတို့က ငေးပြီး ထိုင် ကြည့်နေကြတယ်၊ တိတ်တိတ်လေးနေပေမယ့် ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်၊ ဒီအသံတွေက ဘာသံဆိုတာ သူတို့သိသလို၊ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သိကြတယ်" ဟု စေတနာ့ဝန်ထမ်း စာသင်ကြားပေးနေသူ အင်္ဂလိပ် ဆရာက ဆိုသည်။
"တခါတလေမှာ သူတို့က ကျနော်တို့ကို လာပြီး ဖက်တတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ လူသူဝေးရာ ရှောင်နေ တတ်တယ်၊ တကယ့်ကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေတဲ့ပုံ ရပါတယ်"ဟုလည်း သူက ပြောပြသည်။
ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ မော်တာပစ်ခတ်သံများက ပို၍ ဆိုးလာခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်တပ်များနှင့် DKBA တပ်များက မြေပြင် ထိုးစစ်များ ရပ်ဆိုင်း၍ KNLA တပ်မဟာ(၇) စခန်းကို အဝေးမှ လက်နက်ကြီးများဖြင့်သာ ပစ်ခတ်နေတော့ သည်။ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မဲဆလစ်ကျေးရွာတွင်းသို့ မော်တာကျည်ဆံ ၄ လုံး ကျရောက်လာခဲ့သေးသည်။ ဤနေရာ က ယခု ထွက်ပြေးလာသူ ရွာသားများခိုလှုံနေကြသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် မဝေးလှပေ။ မော်တာကျည်ဆံတလုံးက မဲဆလစ် ကျေးရွာ၏ ထိုင်းအစိုးရ ကျောင်းအနီးသို့ ကျရောက်ခဲ့သေးသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ ကူးလာသည့် စစ်မီးကြောင့် မဲဆလစ် ကျေးရွာသားများလည်း ရတက်မအေး ဖြစ်နေကြရသည်။ DKBA တပ်များက နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီး ရွာတွင်း ၀င်လာမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ DKBA အဖွဲ့က ယခင်ကတည်းက ဒုက္ခသည်များနှင့် အဆက်အသွယ်ရနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြသည်ကိုလည်း သူတို့က သိရှိ ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းက DKBA စစ်သားတဦးက ရွာသားတဦးထံ ချဉ်းကပ်၍ ဒုက္ခသည်များ ယခုခိုလှုံနေရာ ကျေးရွာမှ ဓာတ်ဆီဝယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သေးသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့၊ ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (KHRG) ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တခုအရ DKBA တပ် အရာရှိတဦးက လဲပါဟဲကျေးရွာမှ ရွာသားတဦးကို ဆက်သားအဖြစ်စေလွှတ်၍ ဒုက္ခသည်များကို ဆက်သွယ်ရန် စေခိုင်းခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းဆက်သားအဆိုအရဆိုလျှင် ထွက်ပြေးကြသူ ရွာသားများက တရွာလျှင် ဘတ် ၃,၀၀၀ စီ DKBA အဖွဲ့သို့ ပေးဆောင်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခု ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲအတွက် ပေါ်တာငှားရမ်းစရိတ်သုံးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။
ဤဖြစ်ရပ်များကြောင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မဲဆလစ်ရွာနှင့် အနီးတ၀ိုက်တွင် ယာယီခိုလှုံနေကြသည့် ဒုက္ခသည်များ၏ လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်လာခဲ့သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရဲများနှင့် လုံခြုံရေးများ၊ နယ်စပ်ကင်းတပ်များ တိုး၍ ချထားခဲ့ သည်။ မဲဆလစ်သို့ သွားရာလမ်းတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတိုး၍ ချထားခဲ့ပြီး တပ်များ ထူထပ်စွာ ချထားသည်။ သေနတ် တင်ထားသည့် အမိုးဖွင့် စစ်ဂျစ်ကားများလည်း လမ်းမတလျှောက် ဥဒဟိုမောင်း၍ ကင်းလှည့်နေခဲ့သည်။
ယခု တိုက်ပွဲများက ဆက်လက်ကြာရှည်နေဦးမည်ဟု ယူဆရပါသည်။ DKBA တပ်ဖွဲ့များက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အဖြစ် သူတို့အခန်းကဏ္ဍကို ရယူနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေစဉ် နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြမည် ဖြစ်သည်။ သတင်းများအရ DKBA အဖွဲ့က KNLA တပ်ဖွဲ့ စခန်းများကို သိမ်းပိုက်ချေမှုန်းပေးရေးအတွက် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် သဘောတူ ညီလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့် သူတို့ကို နယ်စပ်တွင် အပိုင်စားရစေမည် ဖြစ်သည်။
KHRG မှ သုတေသနပြု လေ့လာနေသူများအဆိုအရ ယခုအခါ DKBA ခေါင်းဆောင်များက နယ်စပ်လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ အတိုကောက် (BGF) အဖြစ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
အကယ်၍ DKBA တပ်ဖွဲ့များသာ စစ်ဆင်ရေး အောင်မြင်ခဲ့ပါက ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) လက်အောက်ခံ KNLA တပ်ဖွဲ့များကို ဆက်လက်ချေမှုန်း သုတ်သင်မည်ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်တရိုးကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ကြတော့မည် ဖြစ်သည်။ ရွာသားများအနေနှင့်လည်း မိမိရပ်ရွာ ပြန်ရမည့်အရေး ဝေးကြရတော့မည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ယခုယာယီခိုလှုံလာသူများကို ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း ထည့်သွင်းနေရာချထားပေးခဲ့ပါကလည်း သူတို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ဆုံးရှုံးရချေတော့မည်။ မွေးဖွားလာကြသည့် ကလေးငယ်များသည်လည်း သူတို့မိဘများ ရှင်သန်ခဲ့ရာ တောတောင်ရေမြေကို လုံးဝမသိရှိကြရဘဲ ကြီးပြင်းလာကြရတော့မည် ဖြစ်သည်။ သူတို့ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်လာကြသည့် ရေမြေတောတောင်တို့၏ ၀ိညာဉ်များနှင့်လည်း အဆက်ပြတ် ဆုံးရှုံးကြရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသည့် အန္တတရာယ် အခက်အခဲများကို သိထားသော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ပုရ၀ုဏ်အတွင်း စုဖွဲ့ထိုင်နေစဉ်ကာလတွင် ဒုက္ခသည်များက ကြံဖန်၍ ပြုံးပျော်နေနိုင်ကြသေးသည်။
"ကျနော်တို့ ရွာသားတွေက ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဆိုတာကိုတော့ သိတာပေါ့၊ စိတ်ပျက်အားငယ်တာလည်း ရှိတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ဝေးရပြီဆိုတဲ့ အသိတခုနဲ့ပဲ ပျော်နေကြရတယ်၊ သူတို့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နေရတာလောက် စိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ရတာ မရှိပါဘူး"ဟု ရွာ ခေါင်းဆောင်က ရှင်းပြသည်။
"အကယ်၍ ကျနော့်ညီ၊ ညီမတွေ ရွာသားတွေအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန် မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်၊ ကျနော်တို့လည်း ရွာမှာ သေ ကြေဒုက္ခတွေ့နေရလောက်ပြီ"ဟုလည်း သူက နောက်ဆုံး မှတ်ချက်ချခဲ့လေသည်။
Calling the Shots By Alex Ellgee ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာ့လူနေမှုစနစ်က မကယ်နိုင်တော့သည့် လောကကို အရှုံးပေးသွားသူ
ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်ရှိ စာပေဗိမာန် အဆောက်အဦ အပေါ်ထပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့၏ စည်းဝေးရှိသဖြင့် လိုအပ်သည့် စာပွဲခုံများကို ပြင်ဆင်နေသည်။ လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပြီးသည့်အခါ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဖြစ်သူ ဦးမြင့်လွင်သည် သူ့စားပွဲတွင်ထိုင်ပြီး မှတ်စုတခုရေး နေသည်ကို ရုံးမှ အခြားလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များက မြင်တွေ့မိကြသည်။
နံနက် ရုံးလာစဉ်ကလည်း မျက်နှာမကောင်းသဖြင့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် တဦးက နေမကောင်းခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆမိကြသည်။ သို့ရာတွင် နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် သူထိုင်နေရာ စာပွဲတွင် မမြင်တွေ့ရတော့။
အခြားလူများလည်း မိမိကိစ္စနှင့် မိမိလုပ်နေကြပြီး အမှတ်တမဲ့ ဖြင့်နေရာမှ အတန်ကြာသော် သူလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် တဦးက ဦးမြင့်လွင် ဘယ်ရောက်နေလဲဟု လိုက်ရှာရာမှ ၃၇ လမ်းဘက်ကို မျက်နှာပြုသည့် ပြူတင်းပေါက်ပေါ်တွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ပြူတင်းပေါက် ဘောင်နှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့်ကိုင်ထားသည့် ဦးမြင့်လွင်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။
မြင်တွေ့လိုက်သည့် ခဏတွင် တစုံတရာ လုပ်မည့်ရည်ရွယ်ချက်လားဟု စိတ်မှာ ထင်မိလိုက်သည်နှင့် ဦးမြင့်လွင် ဘာလုပ်တာလဲ မလုပ်နဲ့လေဟု ဆိုရုံရှိသေးသည့် ခဏတာတွင် ပြူတင်းပေါက်မှ ခုန်ချသွားခဲ့သည်။
ထိုနောက်တွင်မူ သုံးထပ် အမြင့်မှ ကျသည့်ဒဏ်ဖြင့် ဦးမြင့်လွင်မှာ အပြင်ဒဏ်ရာ မပေါ်သော်လည်း ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ အမြင့်မှ ကျသည်တွင် ဦးခေါင်းပိုင်း ကိုထိခိုက်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသွား ရခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏ စာရေးစာပွဲတွင် သွားရောက်ကြည့်သည့် အခါ ထိုသို့ သေကြောင်းမကြံမီတွင် ချွတ်ထားခဲ့သည့် ကော်ဂိုင်းတပ် မျက်မှန်၊ ငွေ၅၀၀ တန် ၂ရွက်၊ ဘောပင်၊ သော့တွဲများနှင့် အတူ နောက်ဆုံးမှာတမ်းကို လည်းတွေ့ကြ ရသည်။
မှာတမ်းတွင် အစဉ်အလာရှိခဲ့သည့် စာပေဗိမာန်၏ ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် တာဝန်ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် အတွက်မိမိကိုယ်ကို အပြစ်ပေးလိုက်ပါသည် ဆိုသည့် သဘောဆောင်သည့် ၀ါကျ၃၊ ၄ကြောင်း ရေးသားထားခဲ့သည် ကိုတွေ့ရသည်။
ထို အဖြစ်အပျက် မတိုင်မီ ရက်များက ရုံးမှ စာရွက်စာတမ်း အချို့နှင့် စီဒီဓါတ်ပြား တချပ် ရေစိုပျက်စီးခဲ့သည့် အတွက် ဦးမြင်လွင်၏ အထက်အရာရှိလုပ်သူက ဦးမြင့်လွင်ကို ဆူခဲ့ဘူးသည်ဟု လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် များကပြောဆိုကြသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ဦးမြင့်လွင်အတွက် မိမိကိုယ် သေကြောင်းကြံရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည့် အချက်တချက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း သူမိသားစုနှင့် ပတ်သက်သည့် စိတ်ညစ်ညူးစရာ၊ စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲစရာတွေအများအပြား ရှိနေခဲ့သည်ဟု လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် များကပြောဆိုသည်။
သားအငယ်ဆုံး ဖြစ်သူက မကြာသေးမီက ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး မကျန်မာသည့် ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အခြားသမီးတယောက်အတွက်လည်း စိတ်ဖိစီး ပင်ပန်းနေခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ထိုသို့သော အချက်များက ဦးမြင့်လွင် အတွက် ယခုလို မိမိကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များက ကောက်ချက်ချကြသည်။
ယခု အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည့် ဦးမြင့်လွင် လို အသက် ၆၈ နှစ်ဟူသည့် အရွယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက် အနေဖြင့် တော်တော်လေး ကြီးရင့်နေပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။
စီးပွားရေးအရ ပြေလည်သူတွေ အတွက်တော့ အသက်၆၀ ကျော်လျင် အနားယူပြီး မိသားစုဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ လူအများစုမှာမူ ထိုသို့ မနေနိုင်ရှာကြပေ။
စုထားဆောင်းထားသည့် ငွေလုံလုံလောက်လောက် မရှိလျင် သားသမိးများကို မှီခိုရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုသို့မဟုတ်ပါက ထမင်းစားဖို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ အတွက် တတ်နိုင်သည့် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေကြရသည်သာ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အသက် ၆၀ ကျော် ၇၀ အရွယ်ရှိသည့် ဈေးရောင်းနေသူ ဆိုက်ကားနင်းနေသူ အများအပြားကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဘုရားတရား ရှာနိုင်သူ အရေအတွက် အချို့ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ မိမိဘ၀ ရပ်တည်ရေးအတွက် သားသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စကို ၀ိုင်းကူရင်း မှီခိုနေရသည့် မိဘများ၊ ဦးမြင်လွင်လို အလုပ်လုပ်ကိုင် နေရသူများလည်း အများအပြားရှိနေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူများအတွက် အစိုးရ၏ လူမှုဖူလုံရေး စနစ်ဆိုသည်မှာ လုံးဝမရှိသေးပေ။
ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများမှာလို သားသမီးနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းက ကြည့်ရှု မစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် သူများအတွက် လူအိုရုံ၊ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာလိုမျိုး၊ သူ့အိမ်သူ့ရာမှာပင် အစိုးရနှင့် အန်ဂျီအိုများ၏ လူမှုဖူလုံရေး လုပ်သားများက လိုက်လံ ကြည့်ရုသည့် အစီအစဉ်မျိုးလည်း ဒီမှာ မရှိပေ။
မြန်မာလူမှု အဖွဲ့အစည်းသည် နွေးထွေးသည့် မိသားစု ပုံသဏ္ဍန်ဆောင်သည့် လူမှု အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်ဟု ကောင်းသည့် ရှုထောင့်ဘက်မှ ကြည့်လိုက ကြည့်နိုင်သော်လည်း မိဘက သားသမီး မိသားစုများနှင့် အတူတွဲနေရခြင်းများ၊ သားသမီးများကလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် မိဘအိမ်တွင် မှီခိုနေထိုင်ရခြင်းများသည် စီးပွားရေး အခြေအနေအရ သီးခြား ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲသည့် အတွက် ဖြစ်သည်ဟု လူမှုရေး လေ့လာသူများက ကောက်ချက်ချကြသည်။
အကယ်၍သာ မိသားစု တစုချင်းစီ သီးခြားရပ်တည်နိုင်သည့် ၀င်ငွေမျိုးရှိပါက မြန်မာလူမှု အဖွဲ့အစည်းတွင် ယခုကဲ့သို့ စုပေါင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းမျိုးရှိမည် မဟုတ်ဟု ကောက်ချက်ချကြသည်။
နွေးထွေးသည့် မြန်မာ့ လူနေမှုစနစ်ကလည်း ယခုလို ခက်ခဲသည့် စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ အားကိုးဖွယ်ရာ မရှိသည့် အစိုးရ၏ လူမှုဖူလုံရေး စနစ်တို့အကြားမှာ ဦးမြင့်လွင်ကို ကယ်တင်နိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ရှာပေ။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 25 2009 17:04 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အမေရိကန် ဖျက်သင်္ဘော ကနောက်ယောင်ခံ လိုက်နေသည့် ကန်နန် သင်္ဘော နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ဆိုက်ကပ်မည့်သတင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ဟု စစ်အစိုးရ ပြော
၂၅ ဇွန် ရန်ကုန်၊ ၊ဟိန်းခိုင်ထွန်း
Burma:No Information On Tracked North Korea Ship
၂၀၀၇ ခုနှစ်မေလ ၂၁ ရက်နေ့ က ယခု လက်နက်များတင်ဆောင်လာသည်ဆိုသည့်မြောက်ကိုရီးယားသ င်္ဘော သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ပ်ထားစဉ်The Kang Nam I cargo ship docks at the port in Yangon, 21 May 2007.
ယနေ့ ည စစ်အစိုးရ အာဘော် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းအစီအစဉ် တွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန် သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းသို့ လာရောက်၍ အိန္ဒိယ မှ ဆန်များသယ်ဆောင်လာ ရန် ရှိသည့် မြောက်ကိုရီးယားကုန် တင်သင်္ဘော ၀င်ရောက်ရန် ရှိသော်လည်း အမေရိကန် ဖျက်သင်္ဘော U.S. S.John Mccain မှနောက် ယောက်ခံ လိုက်နေ သည့် ကန်နန် ၁ နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိပ် ကမ်း များသို့ ဝင်ရောက် ဆိုက်ကပ်ရပ်နား မည့် သတင်းတစ်စုံ တစ်ရာ မရရှိ ကြောင်း ကြေညာသွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံ တကာသတင်းဌာန များမှ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများသယ်ဆောင် လာသော မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော ကန်နန် မှာ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ဦးတည် နေသည် ဟု သတင်းရေးသားကြသော် လည်း မြန်မာဆိပ်ကမ်းသို့အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ကာလကတ္တားမှ ဆန်တန် ချိန် ၈၀၀၀ ကျော် တင်ဆောင် လာသည့် အမ်ဗွီ ဒူမန်ကန် သင်္ဘော သာလျှင် ဇွန်လ ၂၇ ရက် တွင် ဆိုက်ကပ် ရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်း ကြေညာသွားသည်။
ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ က မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ နမ်ပို ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက် ခွာခဲ့သော တန်ချိန် နှစ်ထောင်ကျော်ရှိ ကန်နန် သင်္ဘော မှာ ကြာသပတေး နေ့ မနက် အစောပိုင်းတွင် ဗီယက် နမ်နိုင် နှင့် အနီးဆုံးတောင် တရုတ်ပင်လယ် နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက် တွင် ရှိနေပြီး အမေရိကန် ဖျက် သင်္ဘော က ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လံ စောင့် ကြမ် လျှက်ရှိသည်။
လက်နက် များသယ်ဆောင် လာသည် ဆိုသော ထို သင်္ဘောအား အမေရိကန် အစိုးရမှ တစ်ဆင့်ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်မှ အမိန့် ရမှ တက်ရောက် ရှာဖွေ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ စစ်အစိုးရ သည် မြောက်ကိုရီးယား နှင့် သံတမန် ပြန်လည် ဆက်သွယ်ချိန် မှစပြီး အကြီးစား စစ်လက်နက်ပစ္စည်း များ ၀ယ်ယူ မှု ရှိခဲ့သည် ဟု အပတ် စဉ် ထုတ် ဂျိမ်း ကာကွယ်ရေးစာစောင် တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
အိုဘားမား ပုံတူ ရေးဆွဲခဲ့သည့် ပန်းချီပညာရှင် ဒေါ်စု ပုံတူကို ဖန်တီး
အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမား ၏ ပုံတူ ကို ရေးဆွဲ ထားသည့် Hope အမည်ရှိ ပန်းချီကားဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သူ အမေရိကန် ပန်းချီဆရာ သည် ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ရုပ်ပုံအား အလားတူ ရေးဆွဲ ဂုဏ်ပြု လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့မှ ရှားပတ်ဖဲရီး က စစ်အာဏာရှင် အစိုးရအား ဆန့်ကျင် တော်လှန်နေသည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လေးစား ဂုဏ်ပြုသည့် အနေနှင့် ပြယုဂ်တစ်ခု သဖွယ် ဤပန်းချီပုံကို ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို ပန်းချီပုံသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော လှုပ်ရှားမှုများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက ပိုမို အာရုံစိုက် လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိကြောင်း ဖဲရီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ပြီးခဲ့သော (၁၉) နှစ်အတွင်း (၁၃) နှစ်တာမျှသော အချိန်ကာလကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်တွင် ဖြတ်သန်း ကုန်လွန် ခဲ့ရရှာသည်။ ယခုလည်း မြန်မာ စစ် အစိုးရက မတရား အကွက်ဆင်မှု တစ်ခုဖြင့် သူမအား အင်းစိန်ထောင်တွင် တရားစွဲဆို မေးမြန်း စစ်ဆေးနေပြီး နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်မျှ ချမှတ်ရန် ပြင်ဆင် နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖဲရီးက ၎င်းအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ပုံကို ရေးဆွဲခွင့် ရခြင်းသည် အလွန် ဂုဏ်ယူရမည့် အခြေအနေ တစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူထားကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပြီး၊ နာမည်ကြီး ပန်းချီဆရာ သည် ယခု လောလောဆယ်တွင် AFP သတင်းဌာန နှင့် တရား ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်း ရေးဆွဲထားသည့် အိုဘားမား ၏ Hope ပုံတူ ပန်းချီကားသည် AFP မှ ပိုင်ဆိုင်သော ဓာတ်ပုံ တစ်ခုကို အခြေခံကာ ကူးယူရေးဆွဲ ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဆန္ဒပြမှုများတွင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သဖြင့် အီရန် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းပြိုကွဲစပြုလာ
၂၅ ဇွန် တီဟီရန်၊ ၊စီအန်အန်။လော့(စ်)ဂျလိစ် တိုင်း နှင့် အီရန်ဘလောက်သတင်းများ
Women in Iran’s protests: head scarves and rocks
မငြိမ်သက် မှု များ၏ နောက်တွင် တော်လှန်ရေး နှင့် အစိုးရဖြုတ်ချရေးက ကျွဲကူးရေပါ ဆိုသကဲ့သို့ ပါလာမည် ကို မသိပဲ ဘယ်အစိုးရတက်တက် အတူတူပဲ ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ကနဦး ဆန္ဒပြပွဲများ ကို ထောက်ခံမှု မပေးခဲ့သည့် အိုဘားမားမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်က အီရန် ခေါင်းဆောင် ဆီသို့ပေးပို့ ခဲ့သည့် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့် ကြရအောင် ဟူသော စာကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် ဝေဖန်မှု များ နှင့် ကြုံတွေ့ နေ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က အီရန် ဆန္ဒပြ သူ တွေ ဟာ ပါလီမန် ရှေ့မှာ စုဝေးခဲ့ပြီးအစိုးရ နှုတ်ထွက်ပေးရေးလွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရေး စတဲ့ ကြွေးကျော် သံတွေ အော်ဟစ်ပြီး ဆန္ဒပြ တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။အီရန် စစ်တပ် နဲ့ ရဲ အဖွဲ့ ကလည်း ဒီဆန္ဒပြမှု တွေ ကို မျက်ရည် ယို ဗုံးတွေ ၊နံပါတ် တုတ်တွေသုံးပြီး ဖြိုခွဲ ပေမယ့် အီရန် ကျောင်းသာပြည်သူ တွေ ဟာ ဖြိုခွဲ ခံရ လို့မိနစ် လေးဆယ် ကြာမြင့်တိုင်းအခြား တစ်နေ ရာ မှာ ပြန်စုနိုင်ခဲ့ လို့ ဆန္ဒပြ မှုတွေ ကို နှိမ် နှင်း ဖို့ အလွန် ခက် နေကြောင်း တီဟီရန်ကလာတဲ့ လော့(စ်) အိန် ဂျလိစ် တိုင်း သတင်းတစ်ပုဒ် မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အီရန် တော်လှန် ရေးအစောင့်တပ်က လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ဘဆဂျစ်(Basisji) လို့ ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ စစ်တွေ နဲ့ရဲ အစောင့် အဖွဲ့ တွေ ဟာ တီဟီရန်မြို့ ရဲ့ လမ်းတိုင်းမှာ စောင့်ကြပ်နေ ပေမယ့် ဆန္ဒပြသူတွေ ဟာ အီရန် အစိုးရ အဖွဲ့ တွင်းက ရာထူးကြီးမားစွာ ရယူထားတဲ့ သူတွေ ရဲ့ အကူအညီ ကိုရတာကြောင့် သူတို့ တွေဟာ အာဏာရှင် အစိုးရ တစ်ရပ် ကို ဖြုတ်ချဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။
စီအန်အန် သတင်းဌာနက ရထားတဲ့ အီရန် ဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံမှာ တော့ အီရန် နိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှိ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့ အစည်းက မူလာ လို့ ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေး ဆရာတစ်ယောက်ကတောင် ဆန္ဒပြပွဲ တွေ မှာ ဦးဆောင် ပါဝင်ပါတယ်။
တီဟီရန် ပြည်သူ လူထုရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကို ထောက်ခံတဲ့ အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယား မှာ ကမ္ဘာ့ ဖလားခြေစစ်ပွဲ အတွက် ကစားနေတဲ့ အီရန်ကစားသမားလေး ဦးဟာ ဆန္ဒပြပွဲ မှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ ကို စာနာကြောင်း ပြတဲ့ အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲ ကနေ နှုတ်ထွက် သွားခဲ့ကြပါတယ်။
ယခင်အပတ်က ခြေစစ်ပွဲ တစ်ခုမှာလည်းသူ တို့ ဟာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးဝါဒီ မူဆာဗီ ကို ထောက်ခံတဲ့ အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် မှာ အစိမ်းရောင် လက်ပတ်တွေ ကို ချဉ်နှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။အီရန် အစိုးရက တော့ ဒီကစားသမားလေးဦးကို ရာသက်ပန် ကစားခွင့်
ကစားသမားလေးဦး နှုတ်ထွက်ခဲ့သည့် အီရန် ဘောလုံးအသင်း
ဆန္ဒပြပွဲ အတွင်းမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ တွေ အတွက် လည်း နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်း
သာရေး အဖွဲ့ ကြီး က စိုးရိမ်မကင်းဖြစ် မိတယ် လို့ သူ တို့ ရဲ့ ကြေငြာချက် ထဲ မှ ထုတ်ပြန် ထားပါ
သီတင်း နှစ်ပတ် နီးပါးကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အစိုးရ ဆန့် ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ တွေ ကြောင့် အီရန် အစိုး
ရ အဖွဲ့ အတွင်း မှာ အကွဲ အပြဲ တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယခု လက်ရှိ ဥသျှောင် အဖွဲ့ က သမ္မ တဟောင်း
ရပ်(ဖ)ဆန်ဂျာနီ ကတော့ပြည် သူတွေ ဘက်ကသာ သူရပ်တည် မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း တရား
အီရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အယာ တိုလာ အလီ ခိုမေနီ က တော့ အမေရိကန်က ပဲ ဖိအား
ပေးပေး ပြည်သူတွေက ပဲ ဖိအားပေးပေး အဖ အီရန် နိုင်ငံတော် ကြီး အတွက် သူဟာ ဦးညွတ်မှာ
မဟုတ်ဘူး လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကတီဟီရန် ရေဒီယို ကို ပြောပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင် သူ အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦးက အီရန် နိုင်ငံ
ဟာ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန် ရောက်နေပြီ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ် ကို ပြန်စဉ်းစားပေးလို့ လဲ လက်ရှိ
ဘာသာ ရေးခေါင်းဆောင် တွေ မှာ ဘာ ဆုံးရှုံးစရာ မှ ရှိမှာ မဟုတ် ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
အီရန် အမျိုးသမီးများက လည်း သူ တို့ ၏ခေါင်းခြုံဝတ်ရုံများကို ဖြုတ်ပြီး ဆန္ဒပြကြပြီ
အီရန် ရဲ အဖွဲ့ တွေ က ဆန္ဒပြသူတွေ ကို တရိစ္ဆာန် လိုရိုက် နှက်ပြီး လူစု ခွဲနေတာတောင် အမျိုး
သမီးတွေ က သူတို့ ရဲ့တောင်းဆို မှု တွေ ကို အရှိန် လျှော့ချဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
အီရန် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကာလမှာ သမ္မတ ခိုမေနီ ကို စာတစ်စောင် ပို့ ခဲ့ဖူးပြီး အီရန် နဲ့ အမေရိကန် ဆွေးနွေးကြရအောင် လို့ရေးသားခဲ့တဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား ဟာ လည်း အကြီးအကျယ်ဝေဖန် ခံရမှု တွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီ ယခုမြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အန်အယ်လ်ဒီပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ဒီခရီးစဉ်အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ သိပ်ပြီးတော့ အကောင်းမြင်ပြောလို့လည်း မသင့်ဘူးဗျာ။ အဆိုးမြင် ပြောလို့လည်း မသင့်ဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားပြီး လာရောက်တာကိုတော့ ကျနော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုစဉ်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် အန်အယ်လ်ဒီက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စသည့် အချက် (၃) ရပ်ကို အဓိကထားတင်ပြခဲ့သည်။
ယင်းသို့ အန်အယ်လ်ဒီဘက်မှ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့သော အထက်ပါအချက်များမှာ ယခုအချိန်ထိ တခုမျှ ပေါ်ထွန်းအောင်မြင်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီခရီးစဉ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း လာရောက်နိုင်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းမှုများ လာရောက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေဖြင့် အောင်မြင်မှုများ မရခဲ့သဖြင့် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရသော Kang Nam မြောက်ကိုရီးသားသင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ကပ်မည့် သတင်းတစုံတရာ မရရှိသေးကြောင်း ယနေ့ထုတ်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြသည်။
ယမန်နေ့ညကလည်း မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ သတင်းထုတ်လွှင့်သွားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက “မနေ့ညက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမှာ လာတယ်လေ။ အဲဒီ Kang Nam သင်္ဘောနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတစုံတရာ ရရှိမထားဘူးတဲ့။ ကာလကတ္တားကနေ လာမယ့် မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောပဲ ၀င်စရာရှိတယ်လို့ ပြောသွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာသည်ဟု ယူဆရသော မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘော Kang Nam သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည်နေသည်ဟု ဖော်ပြနေကြသော်လည်း မြန်မာဆိပ်ကမ်းသို့ ဆန်တန်ချိန် (၈,၀၀၀) ကျော် လာရောက်တင်ဆောင်မည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမှ MV Dumangang သင်္ဘောသာလျှင် ဇွန်လ (၂၇) ရက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရက ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြသည်။
ပြည်ပသတင်းဌာနများက ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည့် Kang Nam ကုန်တင်သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမှ သတင်းတစုံတရာရရှိခြင်း မရှိကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
ဇွန် (၁၇) တွင် မြောက်ကိုရီးယားဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာခဲ့သည့် အဆိုပါ Kang Nam သင်္ဘောပေါ်တွင် မည်သည့် ပစ္စည်းများ ပါသည်ကို အတိအကျမသိရသေးပေ။
မြောက်ကိုရီးယားမှ Kang Nam ကုန်တင်သင်္ဘောသည် ဒုံးလက်နက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသည်ဟု တောင်ကိုရီးယား ထောက်လှမ်းရေး အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ယူဆထားကြပြီး အမေရိကန် ရေတပ်ဖျက်သင်္ဘော USS John S. McCain က နောက်ယောင်ခံ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
စစ်ကိုင်းတောင်ခြေရှိ သီလရှင်စာသင်တိုက်တို့မှ စာသင်သား သီလရှင်များသည် ယခုနှစ်တွင် ဆွမ်းဝေယျာဝိစ္စများ ပိုမိုအခက်တွေ့နေကြသည်။
“ဒီနှစ်ကတော့ ဆွမ်းအလှူခံတာ အခြေအနေမကောင်းဘူး။ လူတွေလည်း ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့ ဆရာကြီး ထင်ပါတယ်ကွယ်။ တခါတလေ ဆွမ်းဆန်ရော၊ အလှူငွေရော မရဘဲ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ သီလရှင်ဆရာလေးတွေတောင် ရှိပါတယ်” ဟု စစ်ကိုင်းတောင်ခြေ ရွှေဟင်္သာအနောက်ဘက်ရှိ သီလရှင် စာသင်တိုက်တခုမှ သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ဟေမာနန္ဒာက ပြောသည်။
သီလရှင်များသည် စစ်ကိုင်းတောင်ခြေနှင့်နီးသော နေရာများတွင်သာမက မန္တလေးမြို့ပေါ်ထိ သွားရောက်၍ ဆွမ်းဆန်နှင့် အလှူငွေ အလှူခံရကြောင်း၊ လိုအပ်သည့်ဆွမ်းဆန်မရရှိသောကြောင့် အဝေးသို့ သွားရောက်အလှူခံရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သီလရှင်ဆရာကြီးက ပြောသည်။
“သီလရှင်ဆိုတာတော့ ၀ိနည်းအရ ဆွမ်းဆန်အလှူခံရတာပါ။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ ဆွမ်းဆန်အခက်အခဲက မန္တလေးထိ တက်ပြီးအလှူခံရတဲ့ဘ၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သီလရှင် စာသင်သားလေးတွေအတွက် လမ်းမှာ ဘယ်လိုများ ဖြစ်မလဲဆိုတာကို တွေးပြီးတော့ ပူပင်နေရတာပေါ့။ ဆရာကြီးတို့ကလည်း သူတို့လေးတွေကို ခုလိုမျိုး ဆွမ်းဆန် အလှူခံဖို့ အဝေးကိုထိ ပေးမသွားစေလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆွမ်းအခက်အခဲရှိတယ်။ အလှူမခံလို့ မရဘူးလေ” ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်းသို့ စာသင်သားသီလရှင်များမှာ အဝေးသို့အလှူခံထွက်ရသည့်အတွက် အသက်အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည် များလည်းရှိကြောင်း စစ်ကိုင်းတောင်ခြေ၊ ရွှေဟင်္သာအနောက်ဘက်ရှိ သီလရှင် စာသင်တိုက်တခုမှ ဆရာကြီး တဦးက ပြောသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ နယုန်လဆန်းပိုင်း ဥပုသ်မတိုင်ခင် အကြိုနေ့က ဆရာလေးတပါးကို ကားတိုက်လို့ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိတ်နေ့ မတိုင်ခင်တရက်မှာ အဲဒီဆရာလေးတို့ သီလရှင် ငါးပါးအဖွဲ့လိုက်က မန္တလေး ဘုရားကြီး (မဟာမြတ်မုနိ ဘုရား) ကို သွားမယ်လို့ ကားစီးဖို့ စောင့်နေတာ။ လမ်းမှာ မောင်းလာတဲ့ကားတစီးက ဘရိတ်ပေါက်တာ အသံက ကျယ်တယ်။ ပြီးတော့ သီလရှင်တွေ ကားရပ်စောင့်နေတဲ့ဘက်ကို ခေါင်းလှည့်သွားတော့ သီလရှင်တွေက လန့်ပြီး ထွက်ပြေးတာ။ သီလရှင်လေးတပါးကို လမ်းပေါ်မှာ မောင်းလာနေတဲ့ကားက ကြိတ်သွားရော၊ ပွဲချင်းပြီး ဆုံးသွား တယ်။ နောက်နှစ်ပါးက ဒဏ်ရာရတယ်။ အဲဒီ သီလရှင်လေးတွေက ရွှေတောင်ဦးသီလရှင်ကျောင်းတိုက်ကလို့ သိရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဆွမ်းဆန်အလှူခံထွက်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည့်အတွက် စာသင်တိုက်မှ ဆရာလေးများ အလှူခံထွက်ပါက ပြန်မလာမချင်း စိတ်မအေးနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ သီလရှင်ဆရာကြီးက ပြောသည်။
သီလရှင် စာသင်တိုက်တခုစီတွင် အနည်းဆုံး စာသင်သားသီလရှင် အပါး (၁၀၀) ကျော်ခန့်ရှိပြီး စာသင်တိုက်ကြီး များတွင် စာသင်သား သီလရှင် (၅၀၀) ခန့်ထိရှိသည်။
စစ်ကိုင်းတောင်ခြေတွင် သီလရှင် စာသင်တိုက်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ရှိပြီး ဆွမ်းဆန်အလှူခံ သီလရှင်ပေါင်း (၇,၀၀၀) ကျော်ရှိကြောင်း စစ်ကိုင်းတောင် သာသနာ့နယ်မြေ စာရင်းများအရ သိရသည်။
ဒေသခံလယ်သမားတို့ကမူ GAA မှ ဖြန့်ဝေသော စပါးများသည် မျိုးစပါးများ မဟုတ်ဘဲ အစိုဓာတ်ရှိနေသော ကြိတ်ဆန်များသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိတ်ဆန်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အဖျင်း၊ အမှော်၊ အလှေ့၊ စပါးခွံများ ထုတ်ပယ်လိုက်ပါက စပါး (၃) တင်းကို ဆန် (၁) တင်းခန့်သာ ထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ အစိုဓာတ်ရှိနေသော ယခုစပါးများကြိတ်လျှင် ကျိုးကြေကုန်ကာ ဆန်အသန့်ပင် မထွက်နိုင်ကြောင်း၊ ပေးဝေသော စပါးမျိုးမှာလည်း ဒေသထွက် ဘေးကြားမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဘေးကြားနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော စပါးမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း စက်စု-စက်ဆန်း ဒိုင်နယ်မှ လယ်သမားများက ပြောသည်။
“မနှစ်က စိုက်ပျိုးရာသီမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ရေငန်ထိုးထားတဲ့ လယ်မြေတွေဟာ (၄-၅) ကြိမ်လောက် မျိုးစပါးကြဲပက်ခဲ့ရကာ စပါးအထွက်နှုန်းလည်း အလွန်ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ နာဂစ်မတိုင်မီက (၁) ဧက တင်း (၄၀-၅၀) ထွက်ရှိတဲ့ လယ်မြေတွေဟာ နာဂစ်အလွန်မှာ ဧက (၂၀) ကို တင်း (၂၀၀-၂၅၀) လောက်သာထွက်လို့ မျိုးစပါး မစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ဘူး” ဟု စက်စု-စက်ဆန်းဒိုင်နယ်မှ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
မိုးစပါးတခုတည်းကို အားထားနေရသော အဆိုပါဒေသများ၌ ၀ါဆိုလဆန်းနှင့် လပြည့်အမီ ပျိုးကြဲ၊ ကောက်စိုက် မှသာ စိုက်ပျိုးချိန်မီမည်ဖြစ်ပြီး ရာသီကျော်လွန်ပါက စပါးအထွက် မကောင်းနိုင်ကြောင်းလည်း ဒေသခံလယ်သမားများက ပြောသည်။
နာဂစ်ကာလက အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ မျိုးစပါးပေးဝေမှု အကြိမ်များပြားမှုကြောင့် (၄-၅) ကြိမ်မက ကြဲပက်စိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့သော်လည်း မျိုးစပါးပေးဝေမှု မရှိသလောက် နည်းပါးနေသော ယခုနှစ် အခြေအနေတွင် ထပ်မံ၍ မျိုးဝယ်ကြဲပက်ရန် လယ်သမားများ အခက်အခဲဖြစ်နေကြသည်။
ကွင်းစခန်းကျေးရွာ လယ်သမားတဦးကမူ “ကျနော်တို့ရွာလည်း GAA ကဝေတဲ့ မျိုးစပါးတွေ ကြဲကြည့်တာ တပင်မှ မပေါက်ဘူး။ ဒါနဲ့ စိုက်ချိန်တွေ လွန်ကုန်မှာစိုးလို့ အပြင်ကပဲ ၀ယ်ကြဲလိုက်ရတယ်။ မထူးပါဘူး။ ကျနော်တို့ဆီ ရောက်လာတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ မှန်သမျှ အလိမ်ကြီးနဲ့ အလိမ်လေးတွေချည်းပဲ” ဟု ဆိုသည်။
ဘိုကလေးမြို့ UNHCR (ဌာနကိုယ်စားလှယ်) တို့၏ နာဂစ်ဒုက္ခသည်များ ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်များသည် ဒေသခံလယ်သမားတို့၏ ခိုင်မာသော ဘ၀ထူထောင်ရေး၊ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော လူမှုဒုက္ခအပေါင်းကို ဖြေရှင်းပေရန် လုံလောက်သော အနေအထားမရှိဟု ဒေသခံများက သုံးသပ်သည်။
မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော ဆန်လာတင်ခြင်းသာဖြစ်ဟု စစ်အစိုးရပြော
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 25 2009 19:24 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည် ခုတ်မောင်းလာဖွယ် ရှိသည်ဆိုသော မြောက်ကိုရီးယား ကန်နမ်သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်၍ မသိရှိဘဲ အခြားသော မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစီးသာလျှင် ဆန်လာတင်မှာ ဖြစ်သည်ဟု စစ်အစိုးရက ပြောဆိုလိုက်သည်။
တန်ချိန် ၂၀၀၀ ရှိ ကန်နမ် - Kang Nam အမည်ရ သင်္ဘောသည် လက်နက် တင်ဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ဖွယ်ရှိကြောင်းနှင့် အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘောက နောက်ယောင်ခံလိုက်နေကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများက ဖော်ပြနေချိန်၌ ယခုလို တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကန်နမ် ကုန်တင်သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမှ သတင်းတစုံတရာ မရရှိကြောင်းနှင့် ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့ခန့်တွင် ရောက်လာမည့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် MV Dumangang ကုန်တင်သင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆန်တန်ချိန် ၈၀၀၀ ခန့် သယ်ဆောင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကလကတ္တားမြို့မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
အေပီသတင်း တပုဒ်တွင် ကန်နမ်သည် ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြား၏ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အကွာတွင် ရောက်နေကြောင်း အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ် ပင်တဂွန်မှ အရာရှိများ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကား ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန် ရေတပ်ဖျက်သင်္ဘော အက်စ် ဂျွန်မက်ကိန်းက ကန်နမ် နောက်သို့ တောက်လျှောက် နောက်ယောင်ခံ လိုက်နေခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကန်နမ် သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းကလည်း တကြိမ် ဆိုက်ကပ်ခဲ့ဘူးသည်။ ရာသီဥတု မကောင်းသဖြင့် ဆိုက်ကပ်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြောခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ခု တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝမ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိခဲ့စဉ် မြောက်ကိုရီးယားတို့က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တောင်ကိုရီးယား ဒုတိယ သမ္မတ အပါအဝင် ဝန်ကြီး ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ နှစ်နိုင်ငံကြား သံတမန်အဆက်အဆံများ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီအတွင်းက သံတမန် အဆက်အသွယ် ပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၈ ခု နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် တတိယအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် မြောက်ကိုးရီးယားသို့ တိတ်တဆိတ် သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 25 2009 18:53 - မြန်မာစံတော်ချိန်
“ဒီနေ့ သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းတော့ ခွင့်ပြုမယ်ထင်တယ်။ တင်တော့ တင်ကြည့်မယ်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းတော့ တင်ကြတယ် မရဘူး။ ပြည်မြန်မာကိုတော့ စာပေစိစစ်ရေးက မှားပြီး ဖော်ပြခွင့် ပေးလိုက်တာလို့ ပြောတယ်” ဟု ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် သတင်းထောက် တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လက်နက်များကို တင်ဆောင် ထားဖွယ်ရှိသော မြောက်ကိုရီးယား သဘောင်္ကို ဟန့်တားရန်အတွက် အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘော တစင်းကို ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က စေလွှတ်လိုက်ကြောင်းဟု အေပီသတင်းကို ဘာသာပြန်၍ ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တန်ချိန် ၂၀၀၀ ရှိ ကန်နမ် အမည်ရ သင်္ဘောသည် လက်နက်များ တင်ဆောင်ပြီး မြောက်ကိုရီးယား မြို့တော် ပြုံယမ်းအနီး မင်ပိုဆိပ်ကမ်းမှ ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့က စတင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည် ထွက်ခွာနေကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများက ဖော်ပြကြသည်။
မြန်မာ စစ်အစိုးရကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာမည့် မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောသည် ကန်နမ် မဟုတ်ဘဲ MV Dumangang သာ ဖြစ်သည်ဟု ယနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှ ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံပိုင် MV Dumangang ကုန်တင်သဘောင်္ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆန်တန်ချိန် ၈၀၀၀ တင်ဆောင်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့ခန့်တွင် ရောက်ရန်ရှိကြောင်း မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင် ကန်နမ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသိရှိကြောင်း စစ်အစိုးရက ပြောထားသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 25 2009 22:26 - မြန်မာစံတော်ချိန်
မြို့ခံတဦးက “ကျနော်ရတဲ့ ပုံက ၂ လက်မ၊ ၃ လက်မ အရွယ်တွေပဲ။ ကျနော်တို့က ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ တွဲထားတဲ့ ပုံပဲ ရတယ်။ ကျနော်ရတာက ကဝဈေးထဲမှာ ရပါတယ်။ ကျနော်လည်း အမှတ်တရ သိမ်းထားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 25 2009 20:03 - မြန်မာစံတော်ချိန်
“ကျနော်တို့ ဌာနချုပ် ပန်ဝါ ဗဟိုဌာနချုပ်မှာပဲ။ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ နေရာတကာက သိတဲ့၊ ကြားနေရတဲ့ ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းသွားဖို့ ဆွေးနွေးတယ်။ လက်ခံသဘောတူပါတယ်။ ဒီနှစ် မကုန်ခင်တော့ ပြီးမယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု NDAK ဥက္ကဋ္ဌ ဆခုန်တိန့်ယိင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ကျနော်တို့အဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဒေသကို ဆက်လက်ပြီးမှ ကာကွယ်ဖို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်ဖွဲ့ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ သဘောတူတယ်” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည့် အစီအစဉ်များနှင့်အတူ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကချင်တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးကို ကချင် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် နေထိုင်နိုင်ရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း ဦးဆခုန်တိန့်ယိင်းက ဆိုသည်။
“ဒီပုံစံကတော့ နိုင်ငံပိုင် တိုင်းရင်းသား သီးခြား အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ပြောင်းပြီးမှ လက်နက်ကိုင်တဲ့လူက သီးသန့်ဖြစ်သွားမယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေက ဘဝသစ် ပြန်ပြီးတော့ ဆောက်ဖို့ လုပ်သွားမယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအား နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ပြောဆိုထားသည့်အနက် NDAK က ယခုလို သဘောတူလိုက်သော်လည်း၊ KIO ခေါ် ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် UWSA ခေါ် ဝ' ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်ကမူ မကြာသေးခင်က ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
မပခ တိုင်းမှူးနှင့် KIO ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ယခုလ ၂ဝ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ရာ KIO က သဘောမတူကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟု KIO နှင့် နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
ထို့အပြင် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်နှင့် အဖွဲ့သည် ယခုလ ၇ ရက်နေ့က UWSA တည်ရှိရာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပန်ဆန်းမြို့ Pang Hsang သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ အသွင်ပြောင်းလဲရေး လက်မခံခဲ့ပေ။ ထိုသို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် စစ်အစိုးရနှင့် သူတို့အကြား နှစ်ဖက်တင်းမာမှုများ ရှိနေကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ UWSA အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
KIO နှင့် UWSA နှစ်ဖွဲ့စလုံးက စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားတပ်အရေး လက်မခံသော်လည်း နောက်တက်လာမည့် အစိုးရသစ်နှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဦးဆခုန်တိန့်ယိင်း ဦးဆောင်သည့် NDAK သည် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့၌ ကချင်လူမျိုးများ၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများ ရရှိရန် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး စတင်ခဲ့သည့် KIO ၏ လက်နက်ကိုင်တပ် KIA က ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ပန်ဝါဒေသ၌ တပ်မဟာ ၃ စစ်ဌာနချုပ်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်သည့် တပ်ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ - ဗကပ ၏ ၁ဝ၁ စစ်ဒေသအဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကာ ဗကပမှ ခွဲထွက်ပြီး ၁၉၈၉ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ခဲ့သည်။
Thursday, 25 June 2009 19:45 ကိုထွေး
မြန်မာစစ် အစိုးရသည် နျူကလီးယားနှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာများကို ရရှိလိုသဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပူးပေါင်းနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားတဦး က ယနေ့ သုံးသပ် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလအတွင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယား လက်နက် ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်သည်ကို တွေ့မြင်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
နျူကလီးယား နည်းပညာကို ရုရှားထံမှ အပြည်အစုံ ရရှိရန် မလွယ်ကူသဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားကို အားကိုး နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သခင်ချန်ထွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
“ရုရှားနိုင်ငံက နိုင်ငံကြီးဆိုတော့ သိက္ခာထိုက်သင့် သလောက် စောင့်ရတော့ ပညာကုန်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မြောက်ကိုရီးယားကတော့ ပေးနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာက အမေရိကန်နဲ့ မတည့်တာလည်း ပါတာပေါ့”ဟု သခင်ချန်ထွန်းက ပြောသည်။
၁၉၇၄-၇၅ ခုတွင် သခင်ချန်ထွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြောက်ကိုရီးယား သံအမတ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ ကန့်သတ် တားမြစ်မှုများ ခံနေရချိန်တွင် မြောက်ကိုရီယား အပါအဝင် ဘဝတူ နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် အီရန်၊ ကျူးဘား အစရှိသော နိုင်ငံများနှင့် ပိုရင်းနှီးရန် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့သို့ အလည်လာရောက်သော တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ချန်ဒူးဝမ်နှင့် အဖွဲ့အား အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် မြောက်ကိုရီးယားတို့က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့၏ သံတမန် ဆက်ဆံရေး ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာ ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ သံတမန် အဆက် အ သွယ် ပြန်လည် ပြုလုပ်ကြရာ ၎င်းဆက်ဆံရေးသည် စစ်အစိုးရ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း သခင် ချန်ထွန်းက ပြောသည်။
သခင်ချန်ထွန်းသည် မြောက်ကိုရီးယားအပြင် တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း သံအမတ်ကြီးအဖြစ် သွားရောက် တာဝန် ယူခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ နျူကလီးယား အိပ်မက်ကို မြောက်ကိုရီးယားက ကူညီနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း သုံးသပ်သူ တချို့က ပြောဆို လျက်ရှိကြသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း အခြေစိုက် အယ်လ်ဂျာဇီးယား သတင်းဌာနကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယား ထုတ်လုပ်မည့် အစီအစဉ် နှင့် ပတ်သက်နိုင်ဖွယ် ရှိသော မြေအောက် ဥမင်များ တည်ဆောက်နေမှု ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းကို ယနေ့ ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည်။၊
မြောက်ကိုရီးယားသည် ပြီးခဲ့သည့်လက နျူကလီးယား လက်နက် စမ်းသပ်ခဲ့သည့်အတွက် လက်နက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ ရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
ဤအတောအတွင်း ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့က မြောက်ကိုရီးယား ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည် နေသည်ဟု သတင်းထွက်နေသည့် မြောက်ကိုရီးယား Kang Nam 1 သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာက အထူး အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။
ယင်းသဘောင်္ပေါ်တွင် အသေးစား စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင် သွားမည်ဟု ယူဆရကြောင်း တောင်ကိုရီးယား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိတဦးက ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ စစ်သင်္ဘောတစီးကလည်း မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောကို နောက်ယောင်ခံ လိုက်လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ဤသင်္ဘောသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အရေးယူမှု ထုတ်ပြန်အပြီးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် စောင့်ကြည့်ခံရသည့် သင်္ဘော ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုအခါ ၎င်းသင်္ဘောသည် တရုတ်နိုင်ငံ ရေပိုင်နက်ကို ကျော်လာပြီး မလက္ကာရေပိုင်နက်အတွင်း ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့သည် သံတမန် ဆက်ဆံရေး အနှစ် ၂ဝ ကျော်ကြာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရာမှ တိတ်တဆိတ် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့ကာ မကြာသေးမီကမှ တရားဝင် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂ဝဝ၇ ဧပြီလတွင် မြောက်ကိုရီးယား ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကင်ရန်အီးလ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်သွယ်ရေး ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ခဲ့သည်။
Thursday, 25 June 2009 19:22 အေးချမ်းမြေ့
မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း (MITT) စတင်ချိန်မှ ၁၀ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လက်နက် ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသည့် သင်္ဘောများ တနှစ်လျှင် အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်ခန့် ဆိုက်ကပ်သည်ဟု ယင်းဆိပ်ကမ်းတွင် နှစ်အတန်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဆိပ်ကမ်း အင်ဂျင်နီယာ တဦးက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရသည် စစ်လက်နက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ တရုတ် တို့ထံမှ ဝယ်ယူလေ့ ရှိရာ သင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူလာသော ၎င်းပစ္စည်းများကို လုံခြုံရေးအဆင်ပြေသည့် သီလဝါဆိပ်ကမ်းမှတဆင့် သယ်ယူ ကြောင်း အဆိုပါ အင်ဂျင်နီယာက ပြောပြသည်။
“အများသောအားဖြင့်တော့ ရုရှားက ပစ္စည်းတွေပဲ၊ သင်္ဘောကတော့ တရုတ်သင်္ဘောဖြစ်တာများတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း မှ ထိပ်ပိုင်း အကြီးအကဲများကို ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်များက ဇွန် ၂၄ ရက်နေ့ ညနေတွင် လျှို့ဝှက်ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းသို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းမှာ ဆိုက်ကပ်လာမည့် မြောက်ကိုရီးယား Kang Nam 1 သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ဆိပ်ကမ်း တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
“ခုချိန်ထိ လုံခြုံရေးလည်း ချမထားဘူး၊ ဘယ်လို အသံမှလည်း မထွက်ဘူးဆိုတော့ ဆိုက်ရောက် အစီအစဉ် လုံးဝမထုတ်ပြန်ဘဲ ရုတ်တရက် ဝင်ဆိုက်မယ်ထင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ သူက ဆိပ်ကမ်း ဝန်ထမ်းများအနေနှင့် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများနှင့် ဆက်သွယ် စကားပြောဆိုခြင်း မပြုရန် အာဏာပိုင်များက နှိုးဆော်ထားသည်ဟုလည်း ဆက်ပြောသည်။ စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင်မူ မြောက်ကိုရီးယား Kang Nam 1 သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်၍ မသိရှိသေးကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။
တန်ချိန် ၂၀၀၀ ခန့်ရှိသော Kang Nam 1 သင်္ဘောသည် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့က မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတို့က စစ်လက်နက်ပစ္စည်း အသေးစားများ ပါရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထိုသို့ ကုလသမဂ္ဂက တားမြစ်ထားသည့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် အမေရိကန် ရေတပ်ကလည်း မျက်ခြည်ပျက်မခံဘဲ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
သီလဝါဆိပ်ကမ်း တာဝန်ရှိသူများက ၎င်းသင်္ဘော မြန်မာပြည်တွင် ဆိုက်ကပ်မည် ဆိုပါက ၎င်းဆိပ်ကမ်းတွင်ပင် ဆိုက်ကပ်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
“သီလဝါဆိပ်ကမ်းက လုံခြုံရေးယူရတာ အဆင်ပြေတယ်။ မြို့နဲ့လည်း ဝေးတယ်၊ ပြည်သူလူထု မသိအောင် တိတ်တဆိတ်လုပ်လို့ကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံတကာ ဆိပ်ကမ်း အင်္ဂါရပ်နဲ့လည်း ညီတယ်ဆိုတော့ အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက် ပစ္စည်းတွေဆိုရင် ဒီဆိပ်ကမ်းမှာပဲ ချတယ်ဟု” ဆိပ်ကမ်း အင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။
ထိုသို့ အစိုးရ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပါလာသည့် သင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်လျှင် သင်္ဘောဆိုက်ကပ်မည့် အစီ အစဉ်ကို ဝန်ထမ်းများအား ကြိုတင်အသိပေးလေ့ မရှိဘဲ ရုတ်တရက် လုံခြုံရေးယူ၍ ဆိုက်ကပ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်း သင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်ရန်အတွက် သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် နေရာ အကျယ်အဝန်းတခုပေးရပြီး ကီးကရိန်း ပြင်ဆင်သည့် တာဝန်ကျ အင်ဂျင်နီယာမှအပ မည်သည့် ဝန်ထမ်း တဦးတယောက်မှ ထိုနေရာသို့ သွားခွင့် မရှိပေ။
၂၀၀၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်က ရုရှားမှ ဝယ်ယူသော စစ်မြေပြင်သုံး (Transporeter erector launcher) ယာဉ် ၁၀ စီးကျော်ချပေးစဉ်က ၎င်း တာဝန်ကျချိန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာက ဆိုသည်။
၎င်း ယာဉ် ကို ဓာတ်ဆီဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယာဉ် နှစ်စီးပေါင်းကို ကားတစီးပေါ်ရှိ အီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ် ရသည်။ ၎င်းယာဉ်ဖြင့် ပစ်ခတ်လျှင် မီတာ ၂၂၀၀၀ အထိ ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီလို စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေချပြီးရင် ည ၂ နာရီလောက်မှာ လမ်းမီးတွေ အကုန် မှိတ်လိုက်တယ်။ ပြီးသွားရင် သန်လျင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်းကတဆင့် မောင်းသယ်သွားတယ်။ အဲဒီကားတွေတုန်းကတော့ အင်းတိုင်ကို တိုက်ရိုက်မောင်းသယ်သွားမယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ယမန်နှစ်အတွင်းကလည်း ယူကရိန်းနိုင်ငံက ဝယ်ယူထားသော အမြောက်တင် ကားများ လာရောက်ချခဲ့သေး ကြောင်း သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း တာာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြသည်။
“အဲဒီသင်္ဘောဆိုက်တုန်းကလည်း ဘာမှမသိရဘူး။ အစီအစဉ်လည်း ကြိုမပြောဘူး။ အုပ်ထားတဲ့ ပျောက်ကျား တာလပတ်တွေကြားက ထိုးထွက် နေတဲ့ အမြောက်ကြီးတွေ တွေ့လို့ သိရတာ။ ကား ၁၄ စီးလောက် ရှိမယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
သီလဝါဆိပ်ကမ်းသည် မီတာ ၁၀၀၀ ကျယ်ဝန်းပြီး စစ်အစိုးရထံမှ မြေငှားစာချုပ် ၂၅ နှစ်ချုပ်ကာ နိုင်ငံခြားက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းစတင်ချိန်က ကွန်တိန်နာ သီးသန့်ချသည့် ဆိပ်ကမ်းအဖြစ်အသုံးပြုရန် ဖြစ်သော်လည်း အရှုံးပေါ်သဖြင့် ဆန်၊ သစ်၊ ပဲ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ အစရှိသည့် ကုန်များကိုပါ အတင်အချပြုလုပ်နေရသည်။
၎င်းဆိပ်ကမ်းတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရေတပ်သင်္ဘောများလည်း လေ့လာရေးခရီးလာရောက်စဉ် ဆိုက်ကပ် လေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထို့ပြင် လူစီး နိုင်ငံခြားခရီးသွား သင်္ဘောကြီးများလည်း ဆိုက်ကပ်သည်။
“သီလဝါမှာကပ်ရတာ သင်္ဘောတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် ကပ်ချင်တဲ့ သင်္ဘောတိုင်း ကပ်ခွင့်မရဘူး။ အစိုးရက အစီအစဉ်ချပေးတဲ့ သင်္ဘောတွေပဲ ကပ်ခွင့်ရှိတယ်။ သီလဝါမှာပဲ အကုန်ကပ်လိုက်ရင် တခြား ရန်ကုန်က ဆိပ်ကမ်း တွေ ဝင်ငွေမရှိတော့မှာစိုးလို့ ခွင့်မပြုတာ” ဟု တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
လက်နက်များ သယ်ဆောင်လာသည်ဟု ယူဆရသော Kang Nam 1 သင်္ဘောကို နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့် လျှက် ရှိသောကြောင့် မူလဦးတည်ထားသည့် မြန်မာပြည်တွင် ဆိုက်ကပ်ခြင်းမရှိဘဲ လမ်းလွှဲသွားနိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတို့က သုံးသပ် ပြောဆိုနေကြသည်။
Thursday, 25 June 2009 19:02 အေးချမ်းမြေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထော၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်အကြံပေးသည့် အဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့ ရှိနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီက ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီ (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
ဂျွန်ဝီလျံယက်ထော၏ နောက်တွင် ကြိုးကိုင်သည့် အဖွဲ့ရှိနေကြောင်းနှင့် ၎င်းအဖွဲ့ကို စုံစမ်းနေကြောင်း ရဲချုပ်က ယနေ့နေလယ်၊ ရန်ကုန်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်း သတင်း ဂျာနယ် အသီးသီးမှ သတင်းထောက် များ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ကြားသိရသည်။
ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဲချုပ်ခင်ရီက ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထော အနေနှင့် စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်နေသူ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း နာရီဝက်ခန့် ရှင်းလင်းပြောကြားသွားသည်ဟု တက်ရောက်သူ သတင်းထောက်များက ပြောသည်။
မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထောအနေနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာပြည်တွင် ကာလရှည်ကြာ နေထိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေးပြည့်စုံသူ မဟုတ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ နေထိုင်နိုင်ရန် နောက်ကွယ်မှ အဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့က ထောက်ပံ့ပေးမှ သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရဲချုပ်ခင်ရီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ရဲချုပ်ခင်ရီက မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထောသည် ပုံမှန်လမ်းကြောင်းမှ ပြန်မထွက်ဘဲ အင်းလျား ကန်မှ ရေကူးကာ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့သည့်အတွက် လွယ်ကူစွာ အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအနေနှင့် ပြည်ပ တရားမဝင် အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သေချာပေါက် တွေ့ဆုံခဲ့လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။
“သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲ သီးသန့်လုပ်တာ။ မစ္စတာ ယက်ထော လာတဲ့နေ့က လုံခြုံရေး တာဝန်ကျတဲ့သူတွေကို အရေးယူမယ် ဆိုတာရယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကလည်း မစ္စတာယက်ထောကို ကူညီသူအနေနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာရယ်ကိုပဲ အပ်ကြောင်းထပ် အောင် အကြာကြီး ပြောသွားတယ်” ဟု ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်သည့် သတင်းထောက် တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဂျွန် ၀ီလျံ ယက်ထော သည် အင်းလျားကန်စောင်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ နေအိမ်သို့ ရေကူး၍သွားရောက်ကာ မေလ ၃ ရက် မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး မေလ ၆ ရက် နေ့တွင် အင်းလျားကန် အတွင်း ၌ ၎င်းအား တွေ့ရှိရသဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း မေလ ၇ ရက်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Thursday, 25 June 2009 19:25 သန်းထိုက်ဦး
မြန်မာ စစ်အစိုးရတပ်နှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA) ပူးပေါင်းတပ်များသည် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ KNLA တပ်မဟာ (၆)ဌာနချုပ်မှ တပ်စခန်းများကို ထပ်မံ၍ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရန် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ ပူးပေါင်းတပ်များသည် KNU ၏ တပ်မဟာ (၇) ဌာနချုပ်မှ တပ်စခန်းများကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ တပ်မဟာ (၆) ဌာနချုပ်ရှိ တပ်စခန်းများကို ထပ်မံ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ (၆) ဌာနချုပ်မှ တပ်စခန်းများကို တိုက်ခိုက်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ DKBA တပ်ဖွဲ့များက အကျိုးစီးပွားရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ နယ်မြေ စိုးမိုး ရေး အတွက်သော်လည်းကောင်း သိမ်းပိုက်နိုင်ရေး ဆက်လက်ကြိုးစားသွားရန်ရှိသည်ဟုလည်း DKBA နှင့် နီးစပ်သူ ဒေသခံတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“DKBA ၉၉၉ လုံးက နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ဖို့ လက်ခံလိုက်ပြီ၊နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ လုပ်ဖို့အတွက် လက်မှတ် လည်းထိုးလိုက်ပြီး၊ လုပ်မယ်ဆိုတော့ သူတို့ နယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့သူတွေ(KNLA)ကို ဒါ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရဲ့တာဝန် တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ တိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
ယင်း KNU တပ်မဟာ (၆) နှင့် တပ်မဟာ (၇) ဌာနချုပ်များသည် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ ခရိုင်တွင် လှုပ်ရှားနေ ပြီး အဓိက တပ်စခန်းများလည်းဖြစ်သည်။
KNLA တပ်မဟာ (၇) ဌာနချုပ် တပ်စခန်းများကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားပြီးနောက်ပိုင်း DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ထိုဒေသများတွင် ရှိသော သစ်များကို ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ရန်ရှိကြောင်းလည်း DKBA နှင်းနီးစပ်သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“သူတို့က ထိုင်းဘက်မှာပဲ ရောင်းမှာပေါ့၊ ဖောက်သည်တွေ အများကြီးရှိတာကိုး၊ အခုတိုက်ပွဲမှာတောင် ဒဏ်ရာရ တာတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာကနေမြဝတီ၊ မြ၀တီကနေ မဲဆောက်အထိရောက်လာကြတာပဲ”ဟုလည်း သူက ပြော သည်။
တချိန်တည်းမှာပင် တိုက်ပွဲများသည် KNLA တပ်ဖွဲ့များနှင့် DKBA သိမ်းပိုက်ထားသည့် တပ်မဟာ (၇) ဌာနချုပ် အနီး နှင့် တောင်ငူမြို့အပါအ၀င် ညောင်လေးပင်၊ သထုံ၊ ဖာပွန်မြို့နယ်များတွင် ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲ အငယ်များ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
KNU ဒု ဥက္ကဌ စောဒေးဗစ်တာကပေါကမူ“ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အခုလို တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာ KNU လက်အောက်ခံ တပ်စခန်းများကို အပြုတ်ချေမှုန်းရေး ဖြစ်တယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက DKBA ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအသစ်အရ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပြောကြားခဲ့ရာ DKBA က သဘောတူခဲ့သည်။
DKBA သည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် သဘောတူညီခဲ့သည့် အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ် သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ စုစုပေါင်း ၁၇ ဖွဲ့ကိုနယ်ခြား စောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲရန် မကြာသေးခင်က ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဇွန်လဆန်းမှ စတင်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA ပူးပေါင်းတပ်များသည် KNLA တပ်မဟာ (၇) ဌာနချုပ်မှ တပ်စခန်းများကိုဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာ ကရင်ရွာသားပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အဖြစ် ထိုင်း နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။
Thursday, 25 June 2009 18:39 ဧရာဝတီ
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ ယခုခရီးစဉ်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ ဇူလိုင်လဆန်းတွင် သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်အကြို သွားရောက်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် ကြိုတင်ကြေညာခြင်းမရှိဘဲ မစ္စတာ ဂန်ဘာရီအနေနှင့် ယခုခရီးစဉ်ကို သွားရောက်ရခြင်းသည် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ခရီးစဉ်အကြို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုများအတွက် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိပြီး ထို့ အတွက် ယခုသွားရောက်သည့် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်တွင် စစ်အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံပြောဆိုမှုများကို လွန်စွာ အားထားမှုရှိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“သင့်လျော်တဲ့အချိန် ကျနော် သွားမှာပါ”ဟု မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက AP သတင်းဌာသို့ အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားခဲ့ သည်။
၎င်းက“မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ကျနော့်မှာ စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်၊ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုအားလုံး ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ သူ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို အခိုင်အမာတိုက်တွန်းပြောကြားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု လည်း ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပြုလုပ်ဖို့ အဓိကကျတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအပါအဝင် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ကျနော် ဘယ်အချိန်မဆို မြန်မာနိုင်ငံကို သွားဖို့ အသင့်ပါပဲ”ဟု မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“ကျနော် အခု ဖြစ်နိုင်ခြေကို ချိန်ဆနေပါတယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ မချရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် မကြာခင် ကျနော် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုလည်း သူက ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရက မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအား လာမည့် ဇူလိုင်လအစောပိုင်း၌ မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ရန် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်အတွင်းတွင် ဖိတ်ကြားထားသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ ၏ ခရီးစဉ်အရ ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး စနေနေ့အထိ ဖြစ်ကြောင်းလည်း AP သတင်းက ဖော်ပြထားသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်မှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ပေါင်း ၇ ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ကာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ၊ အတိုက် အခံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Thursday, 25 June 2009 19:52 အေးလဲ့
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကံဇာတာ အညံ့ပိုင်းတွင် ကျရောက်နေသဖြင့် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခံရဦးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗေဒင်ဆရာ တချို့က ဟောကိန်း ထုတ်လိုက်သည်။
“သူ့မွေးလကနေ ၄၅ ရက် ကျော်ရင် ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်၊ အခုလည်း ထောင်ဆက်ကျမှာပါ၊ သူ့ဂြိုဟ်က ညံ့တယ်၊ မလွတ်ဘူး ဆိုတာ သေချာတယ်၊ ၃ နှစ်ကတော့ တန်းနေတာပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗေဒင်ဆရာ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နာမည် မသေသော်လည်း အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိသည် ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဗမာပြည်ရဲ့ အန္တရာယ်က တခုခု အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့ လူတွေကို ချချကျွေးရတာ ရှိတယ်၊ ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်ကို ချကျွေးပြီးတော့မှ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့ သဘောမျိုး။ သူ့ကိုလည်း အဲဒီလို ချကျွေးမှ တိုင်းပြည်က လိုချင်တဲ့ပုံ ဖြစ်သွားမှာ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“သေချာတယ်၊ အသက် ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇ က သူ့အတွက် Unlucky (ကံမကောင်းတဲ့) နှစ်တွေပဲ၊ သာမန် အင်္ဂါဆိုရင်လည်း Unlucky နှစ်ပဲ၊ ကျန်းမာရေးအရ၊ ယေဘုယျတော့ ၆၆ နှစ်မှာ ပိုသတိထားရမယ် စမယ့် လကလည်း မွေးလကုန် တလအကျော်မှာ” ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့မှ ဗေဒင်ဆရာတဦးကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ခံရမည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“သူက ၂ဝဝ၉၊ ၇ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့ ကနေ ၂ဝ၁ဝ၊ ၄ လပိုင်း ၁၆ ရက်နေ့ အထိတော့ ကံဇာတာ မကောင်းဘူး၊ လုံးဝကို လွတ်လပ်မှု မရှိတော့တာ ပေါ့။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အစစ အရာရာ ညံ့တယ်၊ ကျန်းမာရေး အပါအဝင်ပေါ့” ဟု မန္တလေးမြို့မှ ဗေဒင် ဆရာက တွက်ပြသည်။
ဗေဒင် ယုံကြည်သူ အများအပြား ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များသည်လည်း ဗေဒင် ယုံသူများအဖြစ် သတင်းကြီးသူများဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်တို့ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များ မည်သည့်အချိန်တွင် ကံဇာတာ အတက်အကျဖြစ်မည်ကို အဓိကထား မေးလေ့ရှိကြောင်း ဗေဒင်ဆရာများက ပြောသည်။
ရှေးမြန်မာဘုရင်များသည်လည်း အတိုင်ပင်ခံ ဗေဒင်ဆရာ ပရောဟိတ်များကို တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ထားကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးထက် နန်းသက်ရှည်ပြီး ရာဇပလ္လင်မြဲရေး အတွက်ကိုသာ အဓိကထားကြကြောင်း ဗေဒင်ဆရာတချို့က ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
မြန်မာမင်းများသည် အတိတ်၊ တဘောင်၊ နိမိတ်များကိုလည်း ယုံကြည်ပြီး တဘောင်၊ နိမိတ်များ အတိုင်း ဖြစ်မလာစေရန် ယတြာများဖြင့် အရှောင်အတိမ်း လုပ်ကြသည် ဟုလည်း သိရသည်။
မကြာသေးမီက နိုင်ငံခြားသားတဦး နေအိမ်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်တွင် အာဏာပိုင်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု ပုဒ်မ ၂၂ ဖြင့် ရုံးတင် တရားစွဲခဲ့သည်။
ထိုပုဒ်မသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငွေဒဏ် ကျပ် ၅ဝဝဝ သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် မှ ၅ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် ပုဒ်မဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အကဲခတ်သူ အများစုက အာဏာပိုင်များသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ပြီး နေအိမ်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင် ချုပ်နှောင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၉၆၊ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တို့တွင် အင်အား ရာထောင်ချီသော လူအုပ်ကြီးများ၏ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော်လည်း အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာသူဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ၁၉ နှစ်အတွင်း ချုပ်နှောင်ခံရသည့် ကာလမှာ စုစုပေါင်း ၁၄ နှစ်ခန့်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နောက် ၄ နှစ်အကြာတွင် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရဖွယ်ရှိသေးသည်ဟု မန္တလေးမြို့မှ ဗေဒင် ဆရာက ပြောသည်။
“၂ဝ၁၃၊ ၂ဝ၁၄ ကြားမှာ သူ့အသက်အန္တရာယ် ရှိတယ်၊ ရုတ်တရက် လုပ်ကြံခံရမှု ရှိနိုင်တယ်၊ ထိတော့ ထိမယ်၊ အသက်တော့ မသေဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ယတြာချေရန် လွယ်ကူသည့် နည်းလမ်းတခုကိုလည်း ရန်ကုန်မှ ဗေဒင်ဆရာက အကြံပြုထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုပါက သပြေပန်းခက်ကို မသုံးဘဲ ခရေညွှန့်ဖြင့် ဆုတောင်းပေးပါက ပိုပြီး ထိရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကံကြမ္မာ အကောင်းဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
အင်္ဂါနေ့ဖွား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်မြို့ ဇာတိဖြစ်သည်။ မွေးနေ့မှာ ၁၃ဝ၇ ခုနှစ် ဝါဆိုလဆန်း ၁ဝ ရက်နေ့၊ ၁၉၄၅ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ မိဘများမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အားနည်းခဲ့တယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက ပြောလိုက်ပါတယ်။ မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယမ် ယက်ထော (John William Yettaw) ပထမအကြိမ် အိမ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ညွှန်းဆိုပြီး အဲဒီလို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီပြောဆိုချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်န်အယ်လ်ဒီ) ဘက်ကတော့ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လုံခြုံရေးအရ တာဝန်ရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ရိုက်ချက်ချင်း သတင်းပို့သင့်ပါလျက် အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ၄ ရက်အကြာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ကြမှသာ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက တဆင့် သတင်းပို့ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် သဲလွန်စတွေရဖို့ ခက်ခဲပြီး အဖြစ်မှန် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးလို့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက ပြောသွားပါတယ်။ ဒီအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အားနည်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်ရေး ပြတိုက်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက ပြောကြားသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့ လူတယောက်ဆိုရင် လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူပေမယ့် အကျဉ်းကျနေသူ တယောက်အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
“အကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့ ခံစားမှု၊ အကျဉ်းသားတယောက်ဘက်က တုံ့ပြန်မှုက ဒီအတိုင်းပဲရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ဘူးတယ်။ ကျနော်တို့ကို မကြာခဏ ထောက်လှမ်းရေးက ကျနော်တို့ အခန်းနားကို လာကပ်တယ်ဗျာ၊ ကျနော်တို့ တံခါးရှေ့ကို လာပြီးတော့ ဂျစ်ဂျစ် ဂျစ်ဂျစ်ဆိုပြီး သော့တွေဘာတွေကို လှုပ်လားပြုလား လုပ်တာတွေရှိတယ်၊ မှောင်ထဲမှာ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ဒီဟာတွေ၊ ရှိသမျှဟာတွေကို တာဝန်ရှိတဲ့ လုံခြုံရေးအနေနဲ့ ဘာမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဘယ်တုန်းက ဘာကြားတယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က အကျဉ်းသားအနေနဲ့ နေရတာ။ သူတို့က စောင့်ရှောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်စုကို ချုပ်နှောင်ထားတာ။
“အဲဒီအခါမှာ ဒေါ်စုက သူ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ ဟိုဟာ ဒီဟာ အကုန်လုံး။ ဒါတွေအကုန်လုံးဟာ လုပ်စားချင်ရင် ထောက်လှမ်းရေးကသာ လုပ်မယ်လို့ သူ တွက်ရင် တွက်မှာပေါ့။ ဒီ နိုင်ငံခြားသားလာတာ ဆိုရင်လည်း ထောက်လှမ်းရေးက လွှတ်တာလို့ပဲ သူတွက်ရင်တွက်မှာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် အကုန်လုံးကို ဒေါ်စုက သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာ လုပ်ချင်မှလုပ်မယ်၊ ဒါ သူ့ရဲ့ အကျဉ်းသား Mentality၊ အကျဉ်းသားစိတ်ဓာတ်၊ အကျဉ်းသား ခံစားမှုနဲ့ တုံ့ပြန်မှုဟာ အကျဉ်းသားပုံစံနဲ့ပဲ ရှိမယ်၊ ပုလိပ်က ရပ်ကွက်ထဲ လုံခြုံရေး စောင့်ရှောက်နေတာ၊ ကင်းလှည့် စောင့်ရှာက်နေတဲ့ အရပ်သူ အရပ်သား တွက်ပုံမျိုးနဲ့ တွက်ချင်မှတွက်မယ်။ ဒါကို ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲကို ၀င်ချင်တိုင်း ၀င်လို့ရတာ မဟုတ်ဘဲ ကြာသပတေးနေ့ကြမှသာ ၀င်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အခုလိုလုပ်တာဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က လုပ်တာ မှန်ကန်တိကျတယ်လို့ ပြောနိုင်တာ ဘာလဲဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုယ့်ကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ လူတွေနဲ့ သွားပြီးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ အရိပ်အယောင် မြင်တာနဲ့၊ ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စ မြင်တာနဲ့ သွားပြောမနေနိုင်ဘူး၊ တရားဝင်ပဲပြောမယ်။ တရားဝင်ပြောရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ သူပြောနိုင်တာ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကပဲ ပြောနိုင်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကို ပြောပါလို့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းလာတဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကြမှ သူက အကြောင်းကြားတာ။”
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း မစ္စတာယက်ထောနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက အကျယ်တ၀င့် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယမ် ယက်ထောဟာ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး ကောင်းပြီး ဆင်ခြင် သုံးသပ်နိုင်စွမ်းအား မြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်၊ စိတ်ဝေဒနာရှင်၊ ကျပ်မပြည့်သူ တဦးဆိုတာ မဟုတ်မှန်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မစ္စတာယက်ထောဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အင်အားချည့်နဲ့ မောပန်းပြီး ခြေထောက်ကြွက်တက်တဲ့ ဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရတယ်၊ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် လျော့နည်းတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပေမယ့် ဖမ်းဆီးရမိပြီးတဲ့နောက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အဲဒီရောဂါတွေကို မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုသွားပါတယ်။ အခုလို အိမ်ထဲကို ဒုတိယအကြိမ် လျှို့ဝှက်ဝင်ရောက် သွားနိုင်တဲ့အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ စစ်ဆေးနေပြီးတော့ အဲဒီဖြစ်ရပ်အတွက် တာဝန်ပေါ့လျော့သူတွေ တွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် အရေးယူမှုတွေ လုပ်သွားမယ်လို့လည်း ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဦးဝင်းတင်ကတော့ မစ္စတာယက်ထောကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင်မထုတ်ခဲ့တာဟာ လူသားစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ဘယ်လိုလူတွေမှာမဆို တွေ့ရတဲ့ ရိုးရိုးစိတ်ထားသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူသားစိတ်ဓာတ် မရှိသူတွေအဖို့ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ (Ibrahim Gambari) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို စစ်အစိုးရဘက်က တရားစွဲဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ သွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင် ကြေညာထားခြင်း မရှိဘဲ သွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) ကိုယ်တိုင် သွားရောက်မယ့် ခရီးစဉ်တခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေ ဆက်သွယ်တဲ့ ဦးဝင်းတင် သက်သေမဖြစ်သင့် စစ်အစိုးရရှေ့နေ တင်ပြ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ခုခံပြီး သက်သေထွက်ဆိုဖို့ တင်ပြထားတဲ့ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနဲ့ သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်တင်တို့ကို သက်သေအဖြစ် လက်မခံဖို့ရာ အစိုးရ ရှေ့နေတွေက ဒီနေ့ တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားကြပါတယ်။ ဦးတင်ဦးဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသူဖြစ်ပြီး၊ ဦးဝင်းတင်ကတော့ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေသူ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မခံသင့်ဘူးလို့ စစ်အစိုးရ ရှေ့နေဘက်က ထွက်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဦးသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ တရားရုံးချုပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရဘက်ကရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကပါ လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီဘက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက် ခွင့်ပေးဖို့ အဓိက တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ တရားရုံး ရှေ့နေလည်းဖြစ် အန်အယ်လ်ဒီ ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ဘက် က တင်ပြချက်ထဲမှာ ဦးတင်ဦးဟာ ၁၀ (ခ)နဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့အတွက် တရားရုံးရှေ့မှာ သက်သေ မထွက်ဆိုသင့်ဘူးလို့ တင်ပြပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်ကို ခေါ်ပြီး တရားစွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်း ၁၀ (ခ)၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးတင်ဦးကို လက်မခံသင့် ဘူးဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ချေပပြောဆိုပါတယ်။
နောက် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကတော့ ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနတွေနဲ့ နေ့စဉ်ဆိုသလို အင်တာဗျုးတွေ ပေးနေတဲ့၊ သူ့သဘောထားတွေ ထုတ်ပြောနေတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုံးတော်ကို မလာရောက်သင့်ဘူးလို့ စစ်အစိုးရဘက်က တင်ပြပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းကတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ သဘောကွဲလွဲသူတွေ သက်သေအဖြစ် ရုံးတော်မှာ ထွက်ဆိုခွင့် မရှိဘူးလို့ ဘယ်ဥပဒေမှာမှ ပြဌာန်းထားတာ မရှိဘူးလို့ ပြန်လည်ချေပပါတယ်။ ဦးဝင်းတင် ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနတွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောဆိုနေတာတွေဟာ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ခွင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ကတော့ ဒီလို သက်သေထွက်ခွင့် မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုနေတာတွေဟာ သူ့အပေါ် ခြိမ်းခြောက် နေတာလို့ မြင်တဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“အစိုးရဘက်က ဘာ သဘောထားရှိနေသလဲဆိုရင်၊ ကျွန်တော့်ကို တရားစီရင်ရေးကို နှောက်ယှက်တယ်တို့၊ တရားစီရင်ရေးကို ပျက်ပြားစေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ အရေးယူဖို့ ခြိမ်းချောက်တဲ့ သဘောထားရှိတယ် ဆိုတာ ကို ပြနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သုံးသပ်မိတယ်။ ငါ့ကိုတော့ ခြိမ်းချောက်လာပြန်ပြီ။ အင်္ကျီကိစ္စလည်း ခင်ဗျားတို့ ကြားမှာပေါ့။ ထောင်က အင်္ကျီ ၀တ်လာလို့ ဆိုပြီး ဖမ်းမယ်ဆီးမယ် လုပ်နေတာလည်း ရှိတယ်ဗျ။ သူတို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ကောက်ချက်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို တရားဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူဖို့ စိတ်ကူးတော့ ရှိနေပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ သဘောထားဟာ ဒီအမှုရဲ့ လျှောက်လဲချက်မှာ အစိုးရဘက်က လျှောက်လဲချက်ကို ထောက်ရင် ပေါ်လွင်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေက အခု ဗဟို တရားရုံးမှာ တင်သွင်းတဲ့ အဆင့်က နောက်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပြီး မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြားနာဖို့ ကိစ္စကိုတောင် တရားရုံးက ရက်ချိန်း အမျိုးမျိုး ပေးပြီး အချိန်ဆွဲနေလို့ သုံးသပ်တာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ ဦးဝင်တင်ကတော့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို မြင်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ဘက်က တင်နေတာက လူတွေကိစ္စအတွက် တင်သွင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ တရားဥပဒေက ချို့ယွင်းနေပါတယ်။ တရားခံပြသက်သေကို တရားရုံးက ပယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ပယ်ရင် စာနဲ့ ပေနဲ့ ရေးပြီး ပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ ၂၅၇ (၁) အရ ဒါကို လုပ်ဖို့ အောက်ရုံးက ပျက်ကွက်ပါတယ်။ အခု အထက်ရုံးက တင်တဲ့အခါကျတော့လည်း ဒါကိုပဲ ထောက်ပြပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့က အဲဒီအချက်ကို ကျွန်တော်တို့က လျှောက်လဲတဲ့ အခါ ဘာမှ အကြောင်းပြန်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်း တစုံတရာ မပြုဘဲနဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို ဗွီအိုအေတို့ ဘီဘီစီတို့မှာ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုတောင် ဆက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ပြနေတယ် ဆိုတာက တော်တော်လေး ဂွကျတဲ့အနေအထားပဲ။ ကျွန်တော်တော့ တရားရုံးချုပ်ရဲ့ စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်း မပြီးသေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တော့ ဒီအပေါ်မှာ ဘာမှ ပြောချင်တာ မရှိပါဘူးဗျာ။”
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ခုခံထွက်ဆိုမယ့် သက်သေတွေ တင်ပြတဲ့ ကိစ္စကို တပတ်လောက် အတွင်းမှာ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ကောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီဘက်က မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားမှ ကန်နမ် အမှတ် ၁ အမည်ရှိ သင်္ဘော မြန်မာပြည်သို့ ဦးတည်သွားနေသည်ဟုယူဆရကြောင်း အမေရိကန်တို့က ပြောကြားပြီးနောက် စစ်အစိုးရ သတင်းဌာနက ထိုသို့ ထုတ်လွှင့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်သည့် မြောက်ကိုရီးယားကို အပြစ်ပေးသည့် အနေဖြင့် ချမှတ်ထားသည့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များရှိရာ၊ ဤသင်္ဘောသည် အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ပထမဆုံးအကြိမ် စောင့်ကြည့်ခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရ သတင်းဌာနကမူ ယခုတပတ်အကုန်တွင် မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစီး ဆန် တန်ချိန် ထောင်ပေါင်းများစွာ သယ်ဆောင်ရန် ရောက်လာမည်ဟု ဆိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားမှ MV Dumangang အမည်ရှိ ကုန်တင်သင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ခန့်တွင် ဆိုက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်၊ ဆန် တန်ချိန် ၈၀၀၀ သယ်ဆောင်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့မှ လာမည်ဟု မြန်မာအစိုးရ သတင်းဌာနက ပြောသည်။
မြောက်ကိုရီးယားမှ ကန်နမ် အမှတ် ၁ အမည်ရှိ သင်္ဘောသည် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ စပြီး မြန်မာပြည်သို့ ဦးတည်နေသည်ဟူသော သတင်းများ ပေါ်ထွက်နေသည်ဟု အစိုးရ သတင်းဌာနက ဆိုသည်။
ကန်နမ် သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်သတင်းမျှ မသိရှိရပါဟု ဆိုသည်။
Kaowao ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၀၉။
Kaowao ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ဇွန်-၂၄)။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် - သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း NDAA-ESS မိုင်းလားအဖွဲ့ အပစ်ရပ်ခဲ့ခြင်းအနှစ် ၂၀ ပြည့်အခမ်းအနားကို လာမည့် ဇွန်လ ၂၉ - ၃၀ ရက်နေ့များ၌ မိုင်းလားမြို့ ဗဟိုဌာနချုပ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ကိုလည်း ယင်းအခန်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးက ယနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် ယင်းအခန်းအနားကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟိုကိုယ်စား မည်သူကဦးဆောင်၍ တက်ရောက်မည်ကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် “ဝ” ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း အနှစ် (၂ဝ) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကြီးကို ဗဟိုဌာနချုပ် ပန်ဆန်းတွင်ကျင်းပစဉ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန် ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့က တက်ရောက်ခဲ့ကြ ဟုသိရသည်။
ယခု NDAA ကျင်းပမည့်ပွဲတော်ကို အပစ်ရပ်အဖွဲ့အသီးသီး၏ ခေါင်းဆောင်များအား ဖိတ်ကြားထားပြီး စစ်အစိုးရ ဘက်မှ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလားအဖွဲ့၊၀ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော် UWSA ၊ ကိုးကန့် အဖွဲ့ MNDAA ၊ ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်- ကချင် NDA-K တို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု PDF အဖြစ် ၁၉၈၉ က စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားပြီ စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို ခေါင်းခါငြင်းဆန်နေသည့် အဖွဲ့များလည်း ဖြစ်ကြသည်။
ယင်းအပစ်ရပ်အဖွဲ့များနည်းတူ မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည်လည်း မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MNLA အား နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို လက်မခံငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
လာမည့် ဇွန်လ ၂၉ ရက်သည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသက်တမ်း ၁၄ နှစ်ပြည့် မြောက်မည်ဖြစ်သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲနေ့ အထိန်းအမှတ်နေ့များကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ မော်လမြိုင်မြို့၌ နှစ်စဉ် အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိကျင်းပခဲ့ရာ ရတခတိုင်းမှူးများအဆက်ဆက် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယမန်နှစ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အကျဉ်းချုံး၍ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ရာ ရတခတိုင်းမှူး မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ လာမည့် ဇွန်လ ၂၉ ရက်တွင်လည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲနေ့ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ မည်ကဲ့သို့ကျင်းပမည်ကို ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိသေးဟုသိရသည်။
ဆေးရုံးတွင် မြွေအဆိပ်ဖြေဆေးမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဆရာတော်မှ ဆေးရရှိရန် ဦးဆောင်
Thu 25 Jun 2009, မင်းအာသံ
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ဆေးရုံနှင့် မြို့နယ်ဆေးရုံတို့တွင် မြွေအဆိပ်ဖြေဆေး ဆေးဝါး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပြတ်လတ်မှုကြောင့် မြွေအဆိပ်တားဆီးနိုင်သော ဆေးများရရှိနိုင်ရန် မြွေပေါများသော ကမာဝက်ကျေးရွာ လဝီမာန်ထောဘုန်းကြီးကျောင်း ဆရာတော်မှ ဦးဆောင်ပြီး ရွာသားများနှင့် ဆေးဝါးထောက်ပံ့ပေးသော အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ အဖွဲ့ အဖွဲ့စည်းရခြင်းမှာ ကမာဝက်ကျေးရွာတွင် အဆိပ်ပြင်းသော မြွေများအလွန်ပေါများခြင်းကြောင့် မြွေအကိုက်ခံရသော လူနာ၏အသက်အန္တရာယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ရန် ကျေးရွာအတွင်း မြွေအဆိပ်ဖြေဆေး အရန်အသင့်ရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု ဦးဆောင်သူ ဆရာတော်က မိန့်ကြားခဲ့သည်။
အဆိပ်ပြင်းသောမြွေများနှင့် အကိုက်အခံရလျှင် ဆေးဝါးအချိန်မှီထိုးနိုင်သာလျှင် လူနာအသက်ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ကျေးရွာတွင် ဆေးဝါးအဆင်သင့်မရှိပါက မြို့ဆေးရုံသို့ တဆင့်သွားရမည်ဆိုလျှင် လူနာမှာမြွေအဆိပ်တက်၍ လမ်းခရီးတွင် သေဆုံးမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆရာတော်မှ ဆက်ပြီး မိန့်ကြားခဲ့သည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ ကြုံဖူးတယ်၊ ရွာသားတွေ မြွေအကိုက်ခံရလို့ မြွေအဆိပ်ဖြေဆေးထိုးဖို့ ရွာမှာဆေးမရှိတော့ မြို့ဆေးရုံးကို တက်ရတယ်၊ မြို့ဆေးရုံရောက်ဖို့ နာရီနဲ့ကြာသောအခါ လူနာက အမြွေအဆိပ်တက်ပြီး လမ်းမှာ အသက်ပျောက်ဆုံး သေသွားတာရှိသလို၊ တစ်ချို့က မြို့ဆေးရုံကိုအချိန်မှီ ရောက်သော်လည်းပဲ ဆေးရုံမှာ တစ်ခါတစ်လေ ဆေးဝါးက မရှိပြန်တော့ လူနာရဲ့အသက်ကို မကာကွယ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ ဘုန်းဘုန်းတို့က ဒီမြွေဆိပ်ဖြေဆေးကို ဝယ်ပြီးတော့ အနီးဆုံး ကျေးရွာပြည်သူ့ဆေးရုံးမှာ ထားရှိဖို့ စီစဉ်ထားတယ်” ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ မြွေအဆိပ်ဖြေဆေးကို အလွယ်တကူရရှိရန် အရှေ့တောင်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းဇနီးကို ဆရာတော်တို့က ဆက်သွယ်အကူညီတောင်းရာ မော်လမြိုင်တွင် ၄င်းဆေးရရှိရန် ခက်ခဲကြောင်းနှင့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ မြဝတီမှ ဝယ်ယူမှသာ အလွယ်တကူရနိုင်ကြောင်း တိုင်းမှူး၏ဇနီး ပြောခဲ့သောကြောင့် မြဝတီမြို့တွင် ဝယ်ယူရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
မြွေအဆိပ်ဖြေဆေး ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆရာတော်နှင့် အဖွဲ့သားများက ကျေးရွာအတွင်း၌ အလှူငွေ ကောက်ခံခဲ့ရာ စုစုပေါင်း အလှူခံငွေ ကျပ် (၈) သိန်းရခဲ့ပါသည်ဟု အဖွဲ့ဝင် ဦးပဇင်းတစ်ပါးက ဆိုသည်။ ရခဲ့သော ငွေကြေးအာလုံးကို ဆေးဝါးဝယ်ယူမည်ဟု ဆိုသည်။
မြွေအဆိပ်ဖြေဆေးတစ်ပုလင်း၏ တန်ဖိုးမှာ ၂ သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော သူများအတွက် အခမဲ့ကုသပေးမည်ဟု ဦးပ္ဇင်းက ဆက်ရှင်းပြသည်။
“တကယ်လို့ မြွေအကိုက်ခံရတဲ့သူမှာ မြွေအဆိပ်ဖြေဆေးထိုးဖို့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ရှိရင် ဖြေဆေးကို အခမဲ့ကုသပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေကြတော့ ဖြေဆေးရဲ့ မူလတန်ဖိုးအတိုင်း ပေးဆောင်ရမယ်” ဟု ဦးပဇင်းက ဆိုသည်။
မြွေအဆိပ်ဖြေဆေး ထောက်ပံ့ပေးရန် လွန်ခဲ့သော ၅ ရက်က ကမာကျေးရွာ မုဒုံမြို့နယ် လဝီမာန်ထော ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီး ဆေးဝါးကို မှာယူလျက်ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ဝင်းဖနုံရေးလှောင်တမံကြောင့် လယ်ယာမြေများ ရေးနစ်မြုပ်နေ
Thu 25 Jun 2009, IMNA, မိမွန်စွန်း
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်ရှိ ဝင်းဖနုံရေးလှောင်တမံ စီးဆင်းမှုကြောင့် လယ်ယာမြေများ မစိုက်ပျိုးနိုင်ပဲ ရေမြုပ်နေသည်ဟု သိရသည်။
“ဇွန်လ အစပိုင်းတုန်းက မိုးကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လယ်ဧက ၂၀၀ ကျော်ကျော်လောက် စိုက်ပျိုးလို့မရ်ဘူး၊ ရေးမြုပ်နေတယ်၊ ခုချိန် ကောက်စိုက်ဖို့ အချိန်ကလည်း ကုန်ခါနီနေပြီးလေ၊ ပျိုးထားတဲ့ အပင်တွေလည်း ရေထဲမျောပါကုန်ပြီး ပြန်လည်းမစိုက်နိုင်ဘူး “ ဟု မုဒုံမြို့ရှိ လယ်သမားတစ်ဦးက ကပြောသည်။
မိုးကြီးပြီးသည့်နောက်မှာ ဝင်းဖနုံရေးလှောင်တမံအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြောင်းရေစီးဆင်းမှုကြောင့် ကလေ့ာသော့ကျေးရွာ၊ တောင်ပကျေးရွာ၊ ဒိုးမာကျေးရွာနှင့် ကွမ်ခပူကျေးရွာရှိ လယ်ယာမြေများက ကောက်မစိုက်နိုင်ပဲ ရေးမြုပ်နေသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် လယ်သမားများ ကြဲထားသည့် ပျိုးပင်များ ပျက်စီးကုန်ပြီး ရေးထဲတွင် မျောပါကုန်ကြသည် ဟုသိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့က အခုချိန်မှာ လယ် (၈) ဧကရှိတယ်၊ (၁) ဧကလောက်ပဲစိုက်ပျိုးနိုင်တယ်၊ တခြားဒေသမှာရှိတဲ့ လယ်တော်တော်များကလည်း စိုက်ပြီးသလောက်ရှိနေပြီး၊ ကျွန်တော်တို့က မျိုးပင်ကို နောက်ထပ်တစ်ကြီမ် ပြန်ပြီးတော့ ပျိုးရမယ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံလည်းကုန် အချိန်လည်းကြာတယ်။ ကောက်စိုက်တာ နောက်ကျရင် ကောက်ရိတ်တဲ့အချိန်မှာ် အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဟု” ဟု ဒိုးမာရွာမှ လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်တို့က ဝင်းဖနုံရေးလှောင်တမံကို ဆောက်လုပ်ပြီးနောက် ထိုဒေသမှာ စီးဆင်းနေသည့် အဓိကချောင်းကို ပိတ်လိုက်သည်။ ချောင်း၏ ဘေးတဘက် တစ်ချက်တွင်လည်း လယ်ယာမြေများရှိပြီး မိုးရာသီရောက်သည့် အချိန်တွင် ရေးများ လျံကြလာကာ့ ချောင်းမှတဆင့် လယ်ကွက်ထဲသို့ လျံကြကုန်သည်။
ရေးလှောင်တမံပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ရှိ ကျေးရွာတွင်လည်း မိုးရာသီချိန်တွင် ရေးကြီးပြီး သွားလာရေး အခက်အခဲရှိသည်ဟု ၄င်းကျေရွာမှ ရွာသားတစ်ဦး၏ ပြောပြာချက်အရ သိရသည်။
“နွေရာသီမှာ ဝင်းဖနုံအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ လယ်တွေကို အစိုးကနေ နွေးစပါးလာစိုက်ထားတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ဆည်းကရေးတွေပဲ သုံးတာ၊ ဒါကြောင့်လယ်ယာမြေတွေက တစ်နွေးလုံးဆိုနေတော့ မြက်တွေပေါက်လာတယ်၊ မိုးရာသီရောက်ရင် လယ်သမားတွေ လယ်ပြန်လုပ်ဖို့ မြက်တွေကို ရှင်းရပြန်တယ်၊ သူတို့လုပ်ထားတာကလည်း နည်းမကျဘူးဆိုတော့ ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့” ဟု တောင်ပကျေးရွာမှ လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
စစ်တပ်မှ ထက်ဝက်ဈေးနှုန်းသာ ဝယ်ယူမှုကြောင့် အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များအမြတ်အစွန်းဆုံးရုံး
Wed 24 Jun 2009, ကွန်းဟဒေ့
စစ်တပ်မှ တပ်စခန်းများတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် အုတ်အလုံး သိန်း ၄၀၀ ကျော်လိုအပ်သဖြင့် မုဒုံမြို့နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ထက်ဝက်ဈေးဖြင့်သာ ဝယ်ယူသောကြောင့် အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များက အမြတ်အစွန်းဆုံးရုံးနေသည်ဟု ဒေသခံတို့၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၃ ပတ်ကျော်က စစ်သားအရာရှိများက ကားဖြင့် အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ လာရောက် ကာ စစ်တပ် တပ်စခန်းများ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်၊ အုတ်ရေအလုံး သိန်း ၄၀၀ ကျော်လိုအပ်သဖြင့် ရှိသမျှ အုတ်များကို ၄င်းတို့အား လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းရန် အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များကို ပြောကြားခဲ့သည်ဟု အုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ သိရသည်။
အုတ်များမှာ ဝယ်ယူသူများက စရံငွေပေးထားပြီးသား ဖြစ်နေသောကြောင့် အကုန်လုံးရောင်းချရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်ကို နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြန်ပြောပြသည်။
“အကုန်လုံးရောင်းလို့မရရင် တဝက်လောက်ရောင်းရမယ်လို့ စစ်သားတွေက အတင်းပြောတော့ အုတ်ပိုင်ရှင်တွေက မရောင်းချင်လည်း ရောင်းရတာပေါ့” ဟု မုဒုံမြို့နယ်၊ ကမာဝက်ကျေးရွာရှိ အုတ်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဝယ်ယူသော်လည်း ပေါက်ဈေးအတိုင်း မဝယ်ယူပဲ လျော့ဈေးနှင့်သာ စစ်တပ်မှ ဝယ်ယူလိုသောကြောင့် အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များက အရုံးပေါ်မည်စိုး၍ မရောင်းချင်ကြဟု အုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ သိရသည်။
“ဟိုဈေးဒီဈေးမပြောနဲ့ အကုန်လုံး လျော့ဈေးနဲ့ယူမယ်လို့ သူတို့ (စစ်သား) ပြောတယ်၊ အခု အုတ်ပေါက်ဈေးက တစ်လုံးကို ၅၀ ကျော်တယ်၊ သူတို့က ၃၀ ဈေးနဲ့ပဲ ယူတော့ ကျနော်တို့ ဘာတတ်နိုင်မလဲ၊ အရုံးပေါ်လည်း ပေးရတာပေါ့” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ အုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကမာဝက်ကျေးရွာရှိ အုတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကမူ ၄င်း၏အုတ်ဖိုတွင် အုတ်ရေ နှစ်သိန်းရှိရာ အုတ်တစ်သိန်းကို စစ်တပ်သို့ ရောင်းခဲ့ရသည်ဟု ၄င်းနှင့်နီးစပ်သူမှ သိရသည်။
ထို့နည်းတူ သံဖြူဇရပ်မြို့၊ မုဒုံမြို့နှင့် လမိုင်းမြို့တို့မှ အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များလည်း ၄င်းတို့၏အုတ်ရေ ထက်ဝက်ခန့်ကို စစ်တပ်သို့ လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းရန် စစ်တပ်မှ လာပြောထားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတို့မှ သိရသည်။
ဝယ်ယူပြီးသော အုတ်များကို ရေးမြို့နယ်ဘက်သို့ ကားဖြင့် သယ်ယူသွားသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေ မုဒုံမြို့နယ်ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ ၄င်းအုတ်များသည် ဘုရားသုံးဆူဒေသရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ် စစ်သင်တန်းကျောင်းနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေသခံတစ်ချို့က ပြောသည်။
မလေးရှားတွင် ကျင်းပသော ဒေါ်စုမွေးနေ့ပွဲ၌ ဖမ်းဆီးခံရသူများ မလွတ်သေး
ဇွန်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အခမ်းအနား၌ ဖမ်းဆီးခံရသူ(၁၄)ဦးမှာ မလေး ရှားအချုပ်ထဲ၌ အထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့များကပြောသည်။
ယခုလ (၁၉) ရက်နေ့က ကျင်းပသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အခမ်းအနားပြုလုပ်ရာ တွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရယူခြင်း မရှိသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၆ ဦးအား မလေးရှား အာဏာပိုင်များမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားဝင်အလုပ်သမား လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ နှစ်ဦးကိုသာ ပြန်လွတ်ပေးကာ ကျန်သူများကို ထိန်းသိမ်း ထားဆဲဟု မလေးရှားအခြေစိုက် မြန်မာအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးရေးကော်မတီ (BWRPC) မှ ကိုကျော်ထူးအောင်က ယခုလို ပြောသည်။
“အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီမှာလည်းတော်တော်လေးကိုဂယက်ရိုက်သွားတယ်။ သူတို့ လွတ်တယ် ပြောတဲ့သူတွေကလည်း ကျနော်တို့လူတွေချည်းပဲ။ ကျနော်တို့ဆီလည်း ပြန်မရောက် လာဘူး၊ ရဲစခန်း မှာမေးတော့လည်းမလွတ်သေးဘူး။ ရှေ့နေတွေဘာတွေကို မေးတော့လည်း မလွတ်သေးဘူး။ နောက် ဆုံး ကျနော်တို့ အတည်ပြုထားတာက လုံးဝ မလွတ်သေးဘူး။ရဲစခန်းက ကိုယ်တိုင်ကပြောတာ မလွတ် သေးဘူးတဲ့။”
ထိမ်းသိမ်းခံရသူများထဲ၌ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) အသိအမှတ်ပြု ထုတ်ပေး ထားသည့် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ ၆ ဦးပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အား ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်သည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့်အပေါ် “အဲဒီအဖမ်းခံရတဲ့ အထဲမှာ ကျနော်တို့လူ ၃ ယောက် ပါတယ်။ ကျနော်တို့လူ ၃ ယောက်စလုံးက UNHCR လက်မှတ်တွေနဲ့ပဲ။ နောက်ထပ် ၃ ယောက်ပဲ UNHCR လက်မှတ်ရှိတယ်။ အကယ်၍ ၆ ယောက်လွတ်လာတယ်ဆိုရင် အဲဒီ UNHCR မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူ ၆ ယောက်ပဲဖြစ်နိုင် တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ၆ ယောက် စလုံး ကျနော်တို့ကို ဘယ်သူမှ အဆက်အသွယ် မလုပ်သေးဘူး။ UNHCR ကိုဖုန်းဆက်တော့လည်း သူတို့မသွားရသေးဘူး။” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထိုနေ့ညက အဖမ်းခံရသူပေါင်း ၁၆ ဦးရှိပြီး တရားဝင်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ ၂ ဦးကို ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကာ ကျန် ၁၄ ဦးအား ယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်ဟု အဖမ်းခံရ သည့်ညက ပြန်လွတ်လာသူ လူ့ဘောင် သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ကိုမင်းသိန်းကယခုလို အတည်ပြုပြောသည်။
“လုံးဝတော့ မလွတ်သေးဘူး။ မလွတ်သေးဘူးဆိုတာ အဲတာတော့ ကျိန်းသေတယ်။ လွတ်တာနဲ့ ကျ နော်တို့ အကုန်လုံး အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ အဓိကကတော့ အဲဒီမှာ ဦးစီးပြီး လုပ်နေတာက ရှေ့နေ များကောင်စီက ဂျနီဖားဆိုတဲ့ ရှေ့နေမပေါ့။ အဲ့ဒီညက သူကိုယ်တိုင် လည်းပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး အဲဒီကိစ္စကို လိုက်နေတာ။ တကယ်လို့ လွတ်လာတယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ အားလုံးသိမှာပေ့ါ။”
လောလောဆယ်အခြေအနေအရ ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများအား မည်သည့်ပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲ မည်ကို မသိရသေး သော်လည်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။
အဖမ်းဆီးခံထားရသူများအနက် ရခိုင်ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ (ARRC) မှ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသန်းဦးလည်း ပါဝင်ပြီး UNHCR လက်မှတ်ကိုင်ထားသူများအား လွတ်ပေးလိုက်သည့် သတင်းကို အတည်မပြုနိုင်သေးဟု ARRC မှ ကိုခိုင်အေးက ပြောသည်။
မလေးရှား ဥပဒေအရ အထိန်းသိမ်းခံထားရသူများအား တွေ့ဆုံခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားကာ ထိန်းသိမ်းပြီး ၁၄ ရက် ကြာမှတွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်ပြီး မလေးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူခံရနိုင်သည်ဟု မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ခန့်မှန်းကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ပွဲကို မလေးရှားအတိုက်အခံပါတီ Parkatan Rakyat (PKR) မှ ဦးဆောင် ပြုလုပ်၍ မလေးရှား NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက် နေသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထင်ရှားသည့် အမေရိကန်အနုပညာရှင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုံတူဖြင့် ဂုဏ်ပြု
ထင်ရှားတဲ့ အမေရိကန်အနုပညာရှင် ရှက်ပတ်ဒ် ဖယ်ရီ (Shepard Fairey) က Freedom to Lead ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံတူ ရုပ်ပုံလွှာတပုံကို ရေးဆွဲပြီး ဇွန်လ ၂၄ရက် မနေ့က စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ရေးဆွဲခဲ့တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပုံရဲ့အောက်မှာ "Support Human Rights" "Democracy in Burma" ဆိုတဲ့ စာတန်း နှစ်ခုကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ ရှက်ပတ်ဒ် ဖယ်ရီ (Shepard Fairey) ဟာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က အမေရိကန်သမတလောင်း အိုဘားမား မဲဆွယ်ပွဲအတွက် မျှော်လင့်ချက် "Hope" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အိုဘားမားရဲ့ ပုံတူရုပ်ပုံလွှာကို ရေးဆွဲခဲ့သူ အနုပညာရှင်အဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားနေသူပါ။
Shepard က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံကို ရေးဆွဲခဲ့ရာမှာလဲ သမတ အိုးဘားမား ရုပ်ပုံလွှာတုန်း ကလိုပဲ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ လိုင်းမာတွေနဲ့ရေးဆွဲပြီး ဒီပုံမှာတော့ အနီနဲ့အနက်ရောင်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ရှက်ပတ်ဒ် ဖယ်ရီ (Shepard Fairey) နဲ့ပတ်သက်ပြီး US Campaign for Burma အဖွဲ့က Jeremy Woodrum က Shepard အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အထင်ရှားဆုံး အနုပညာရှင်တွေထဲက တဦးပါ။ အထူးသဖြင့် တက်ွ့ကတဲ့ လူငယ်ထုတွေက သူ့လက်ရာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သမတ အိုဘားမား ရုပ်ပုံလွှာ ဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကို ဆွဲဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါလို့ Jeremy က ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၁ဝ နှစ်ကျော် ဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့ ဂျက်ခ် ဟီရိုရီ (Jack Heaoey) ကလည်း ပန်းချီဆရာ Shepard အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ရေးဆွဲခဲ့တာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့အပေါ် အာဏာလွှဲပြောင်းရေးတို့အတွက် ထောက်ခံတဲ့သဘော ပြတာလို့ ထင်မြင်ကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။ ဒီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်ပုံလွှာကို ကမႝာတဝန်း ဆက်လက် ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရွှေတြိဂံ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိုင်းလောက် မြန်မာအောင်မြင်မှုမရ
ရွှေတြိဂံဒေသလို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ထိုင်း၊ မြန်မာနဲ့ လာအို နယ်စပ် ဒေသက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပပျောက်ရေးနဲ့ ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအနက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အောင်မြင်ပေမဲ့ မြန်မာနဲ့ လာအိုမှာတော့ ထင်သလောက် အောင်မြင်မှုမရှိဘူးလို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးကို မိမိတို့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် ဖမ်းဆီးမိသော မူးယစ်ဆေးဝါး မျိုးစုံ ဒေါ်လာ ၂၇၂ . ၅သန်းဖိုးကို ၂ဝဝ၇ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့က လားရှိုးမြို့တွင် မီးရှို့ပြနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပပျောက်ရေးအတွက် ဓာတ်ငွေ့ဖျန်း ဖျက်ဆီးတဲ့ စီမံကိန်းတွေ မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ အောင်မြင်တဲ့အကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နည်းကို အတုယူဖို့ အာဖဂန်နဲ့ အီရတ်ဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ရစ်ချတ် ဟိုးလ်ဘရွတ်က ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၂၅ရက်မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံနည်းနဲ့ အောင်မြင်ရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အောင်မြင်ရတာဟာ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်ပါတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသူတဦးဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးခွန်ဆိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အခုလို သုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။
ဦးခွန်ဆိုင်း။ ။ 'ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု (တိုက်ဖျက်)တာ အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံပဲ ရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ သူက ဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ သူက လုပ်ဆောင်တာကိုး နော်။ နောက်ပြီးတော့မှ ဒီ အစားထိုး သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးတာတွေလည်း သူတို့က သေသေချာချာ ဦးစီးပြီးတော့ လုပ်တယ်။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီးတော့ လုပ်တယ်ဆိုတော့ သူတို့က အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ ရတာပေါ့နော်။'
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရာသီဥတုကြောင့် ဒီနှစ် ဘိန်းအထွက်ကျခဲ့ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံလို အောင်မြင်မှု မရှိဘူးလို့ ဦးခွန်ဆိုင်းက ပြောပါတယ်။
ဦးခွန်ဆိုင်း။ ။ 'ရှမ်းပြည်တို့၊ ဗမာပြည်တို့ ဒီ ကချင်ပြည်တို့ ဆိုရင်တော့ ဒီဥစ္စာ ဒီလိုမျိုးနည်းကို သုံးဖို့ ဆိုလို့ရှိရင် က္ဆွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီ လူတကာက လူအများက ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဦးဆောင်တာ ဖြစ်ရမယ်။ နော်၊ အဲလိုမျိုး မဖြစ်ပဲနဲ့ တကယ်လို့ လူအများက မုန်းတီးရွံရှာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက ဦးဆောင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အောင်ဖို့ လမ်းလည်း မရှိပါဘူး။ သူတို့က တပ်တွေကို မဟားဒရား တည်ထောင်တယ်။ ဒီစစ်တပ်တွေကို သူတို့ စားဖို့ သောက်ဖို့၊ ဝတ်စားနေထိုင်ဖို့ရော ဘာမှ တာဝန် မယူပေးဘူး။ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ယူရတယ်။ ကိုယ်စားဖို့ နေထိုင်ဖို့ ဒါတွင်မကသေးဘူး၊ တပ်ရင်း ရန်ပုံငွေအတွက် ရှာပေးရတယ်။ အဲလိုမျိုး အခြေအနေမှာ ဘိန်းပပျောက်ရေး လာလုပ်မယ်ဆိုတော့ သူက သိပ်ခက်သွားတာပေါ့။ ဘိန်းစိုက်မှ ကိုယ့်အတွက်လည်း ဖူလုံတယ်၊ စစ်တပ်ကို ကွေ္ဆးဖို့လည်း ဖူလုံတယ်၊ အဲလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။'
အာဖဂနစ္စတန်ဟာ ကမႝာ့ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုမှာ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ဒုတိယနေရာမှာ ရှိပါတယ်။
အာဖဂန်မှာ ဘိန်းပပျောက်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ဒေါ်လာ သန်းရာပေါင်းများစွာ သုံးနေပေမဲ့ ထိရောက်မှု မရှိတဲ့အပြင် အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက် ဝါဒဖြန့် လူစုဆောင်းရာမှာ အကြောင်းရင်းတခုလိုတောင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာဟိုးလ်ဘရွတ်က ပြောကြားပါတယ်။
ဂ္ဆွန်ယက်တောအမှုကိစ္စ စစ်အစိုးရက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုမှာ တရားခံတဦးအဖြစ် စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား John William Yettaw ဟာ နောက်ကွယ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲချုပ်က ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၂၅ရက်မှာ စွပ်စွဲ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အင်းယားကန်ကို ဖြတ်ကူးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်တွင်း ခိုးဝင်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုခြင်း ခံနေရသော အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂ္ဆွန် ဝီလီယမ် ယက်တော ရန်ကုန်မြို့တွင် ခေါင်းစွပ်အမဲစွပ်ပြီး မိမိဖာသာ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံကို ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြသထားပါသည်။ (Photo: AFP)
ဂ္ဆွန်ယက်တောအကြောင်း ရည်ရွယ်ပြောကြားတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုကို ဒီကနေ့ နေ့လယ်က ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မူးယစ်ဆေးဝါး ပြတိုက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီက ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပရာမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက အခုလို စွပ်စွဲလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နောက်ကွယ်က အဖွဲ့အစည်းကို နာမည်နဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မရှိပေမဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မှာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ အောက်တိုဘာတွေမှာ နေထိုင်စဉ် မဲဆောက်မြို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (AAPP) က တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ရဲချုပ်ခင်ရီက ပြောပါတယ်။
ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းရာမှာ သူ့အနေနဲ့ မသိရှိကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းကိုလည်း မနေ့က သတင်းစာမှာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဖြစ်ကြောင်းသာ ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်က သတင်းထောက်တဦးနဲ့ RFA မှ ကိုကျော်မင်းထွန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဂမ်ဘာရီ မြန်မာပြည်သို့ သောကြာနေ့ရောက်မည်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို မနက်ဖြန် ဇွန်လ ၂၆ရက် သောကြာနေ့မှာ ရောက်ရှိမယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ မြန်မာအရာရှိတဦးက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
(Photo: UN Photo/Eskinder Debebe )
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးထားသော မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ။ (Photo: UN Photo/Eskinder Debebe )
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီအနေနဲ့ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိသလို၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံလိမ့်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ပြောဆိုပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီဟာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို ပြန်လည် အစီရင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာ ကြညြ့်ပီး အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို လာမဲ့ ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှာ သွားဖို့မသွားဖို့ကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ သောကြာနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ကို လေယာဉ်နဲ့ ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး စနေနေ့မှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်ကနေတဆင့် စစ်အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်ကို သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုတဲ့ မြန်မာအရာရှိက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံတမန် အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ သောကြာနေ့ ရောက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဝက်တုပ်ကွေးသတင်းများ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွက်ပေါ်
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ A-H1N1 အမျိုးအစား တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု သိသိသာသာ တိုးများလာနေပြီး၊ ကမေႝာဒီးယားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားနေပြီလို့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်ရှိ မူလတန်းကျောင်းတခုတွင် ပိုးသတ်ဆေး ပက်ဖျန်းပြီး ဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေပုံဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ စစ်အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်မှု မရှိသလို၊ WHO ကမႝာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်း ရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားမှု မရှိသေးဘူးလို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရန်ကုန် WHO ရုံးအရာရှိတယောက်က ပြောပါတယ်။
WHO အရာရှိ။ ။ 'မရှိပါဘူးဗျာ။ က္ဆွန်တော်တို့ ဒီမှာ update တွေလေ၊ ဒီမှာ တွေ့တာတွေ အကုန်လုံးက ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာ တင်ထားတယ်နော်။ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကြည့်ရင် က္ဆွန်တော်တို့ ဒီက response တို့၊ လုပ်ထားတာတွေ အကုန်လုံး ပါပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာ တင်ထားတယ်။ www.whomyanmar.org ထဲမှာ ကြည့်ရင် အကုန်ရပါတယ်။'
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမႝာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရုံးရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာတော့ တခြား ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အချက်အလက်တွေကိုသာ ဖော်ပြထားပြီး၊ ဒီကနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြမထားပါဘူး။
ဒီအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရောက် သြစတြေးလျနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီးတဦးမှာ တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးကူးစက် ခံထားရကြောင်း သံသယရှိတဲ့အတွက် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဟုတ်မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာက စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ A-H1N1 အမျိုးအစား တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA က သီးခြားအတည်ပြုလို့ မရသေးပါဘူး၊
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီရောဂါပိုး နောက်ထပ်ကူးစက်ခံရသူ ၆၉ ဦး ရှိတဲ့အတွက် ရောဂါဖြစ်ပွားနေသူ ၁ဝ၅၄ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းက မလေးရှားမှာ ၈ဝ ဦး၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ၂၂ဝ ဦး၊ ဗီယက်နမ်မှာ ၅၆ ဦး၊ လာအိုမှာ ၃ ဦး၊ အိန္ဒိယမှာ ၅၉ ဦးနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှမှာ ၇ ဦး စသဖြင့် ရောဂါ ကူးစက် ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ကမႝာ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ AIDS တိုက်ဖျက်ရေး ပိုမိုနှောင့်နှေး
ကမႝာမှာ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်နေချိန် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ ကျဆင်းလာတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV / AIDS ဝေဒနာရှင်များ ပိုပြီးများလာတယ်လို့ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူတွေက RFAကို ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အေ့ဒ်စ်ရောဂါ ညီလာခံတခုတွင် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များကို အသက်ဆက်ပေးနိုင်သော ARV ဆေးအချို့ကို ပြသနေပုံဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လက ကုလသမဂ္ဂက သတိပေးချက်တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကမႝာ့စီးပွားရေး မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေချိန်မှာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံများက အကူအညီများ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေထံကို ပေးပို့တာ နည်းသွားနိုင်တာကြောင့် HIV / AIDS ရောဂါ မပြန့်အောင် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလောအနေနဲ့ ဒီရောဂါရှင်တွေ သောက်ရမဲ့ဆေးကို NGO အဖွဲ့တချို့က တာဝန်ယူ ဖြန့်ဝေပေးနေတာ ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဝေဒနာရှင်အဟောင်းတွေကိုသာ ပေးဝေနိုင်ပြီး ဝေဒနာရှင် အသစ်များကို ဆေးပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးကို ကိုယ်တိုင် ဝယ်သောက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ မဖြူဖြူသင်းက ခုလို ပြောပြပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်း။ ။ 'ဒီဆေး တလစာကို သာမန်ပေါ့နော်၊ သုံးမျိုးပေါင်း သောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နှစ်သောင်းခွဲကနေ သုံးသောင်း ကြားမှာ ရှိတယ်။ နောက် အဲဒီဆေးနဲ့ မတည့်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဆေးတွေ ပြောင်းရတာ ရှိတာပေါ့နော်။ အဲဒီ ဆေးပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးစရိတ် တက်လာနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများကတော့ နှစ်သောင်းခွဲနဲ့ သုံးသောင်းကြား ဆေးနဲ့ကို တည့်တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ တရာမှာ ငါးယောက်၊ ခြောက်ယောက် နှုန်းလောက်ကတော့ ဒီ ဆေးပြောင်းရတာမျိုးတွေ ရှိတာပေါ့နော်။ ဆိုတော့ ဒီ မြန်မာပြည် အခြေအနေအရကတော့ ဒီဈေးနှုန်းတွေက နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် အများကြီး သက်သာပါတယ်။ သက်သာတယ် ဆိုပေမဲ့ စီးပွားရေးရော အားလုံးက ပျက်စီးနေတဲ့အခါကျတော့ လူတွေက ဆေးဝါးတော့ ကုသချင်တယ်။ ဆေးဝါးကို ပြန် ကိုယ်တိုင် ဝယ်သောက်နိုင်တဲ့ အင်အား လုံးဝမရှိကြဘူး။'
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆေးကုမ္ပဏီ လာဖွင့်ထားတာကြောင့် နိုင်ငံတကာထက်စာရင် ဈေးသက်သာတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ဝေဒနာရှင်အားလုံးလိုလို ဝယ်သောက်နိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရောဂါပြန့်ပွားနှုန်း မြင့်လာခြင်းဟာ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ နယ်လှည့်လုပ်ကိုင်နေသူတွေ များတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်း ရွှေထွက်ရာ ဒေသများနဲ့ ကျောက်တူးလုပ်ငန်းတွေမှာ လူအများအပြား သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ ရှိသလို တချို့ကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ကွက်ရှိတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေကို ပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေ ရှိတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝေဒနာရှင်တွေကို အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်း တွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ မဖြူဖြူသင်းကို RFA မှ ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
သတင်းလက်ဦးရေး မြန်မာသံရုံးများကို စစ်အစိုးရ ဖိအားပေး
မြန်မာသံရုံး အတော်များများက မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ မပို့ပဲ ထိန်ချန်ထားတယ်လို့ စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီးက မြန်မာသံရုံးတွေကို အပြစ်တင်ထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အားပေးထောက်ခံသူများကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၃ဝရက်နေ့က ဒီပဲယင်းတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ပြီး NLD ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထားသဖြင့် လန်ဒန်မြို့ရှိ မြန်မာစစ်အစိုးရ သံရုံးရှေ့တွင် ဇွန်လ ၃ရက်နေ့က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေသူများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ပြည်ပ မြန်မာသံရုံး အကြီးအကဲတွေ မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်တွေကို ပေးပို့တဲ့ သတင်းလက်ဦးမှုရရေး ညွှန်ကြားချက်မှာ နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်က ခုလို ပြစ်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ညွှန်ကြားချက် ဖတ်ရသူ သံတမန်တွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာနတွေက ထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းတွေကို အမြန်ရနိုင်ရေးအတွက် Breaking News တွေကို ဝယ်ယူဖို့၊ အင်တာနက် ဝက်ဆိုက်တွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ပြီး အစီရင်ခံဖို့၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်က ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
လက်ရှိ်အခြေအနေမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို လိုလားမှုမရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီးတချို့နဲ့ နောက်လိုက်နိုင်ငံတွေ၊ ဆန့်ကျင်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရကို အထိနာအောင် ကြံစည် ထိုးနှက်နေတယ်လို့ပါ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်က ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
မြန်မာသံရုံး အတော်များများကလည်း မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီးသတင်းတွေ ကြိုသိတာတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အမှန်အတိုင်း နေပြည်တော်ကို အစီရင်ခံရင် ရာထူး ထိခိုက်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့တာမို့ မြန်မာသံအမတ် အတော်များများက အမှန်အတိုင်း သတင်းမပို့တာ နှစ်အတော်ကြာပြီ ဖြစ်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရန်ကုန်သံတမန်တဦးက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်လေဆိပ် အငှားယာဉ်လုပ်ငန်းကို စီးပွားရေးဦးပိုင် လက်ဝါးကြီးအုပ်
ခုသီတင်းပတ်ကစပြီး ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်ငွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်ပိုင် မော်တော်ယာဉ်တွေက မြို့တွင်း ပို့ဆောင်ရေး အငှားယာဉ်လုပ်ငန်းကို အပိုင်စားရထားသလို လုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက် အရင်က ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အငှားယာဉ်တွေ အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး စီးပွားရေးမြို့ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားများ သွားလာနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
အရင်တုံးက ဘယ်တက္ကစီသမားမှ လေဆိပ်အတွင်းဝင်ပြီး ခရီးသည်ခေါ်ခွင့် မရှိပေမဲ့ ဦးပိုင်အဖွဲ့ကတော့ လေဆိပ်အတွင်းထဲမှာ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲ လုပ်ခွင့်ရှိနေပါတယ်၊ ကိုယ်တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ ပုဂ္ဂလိက တက္ကစီသမား တဦးက ခုလိုပြောပြပါတယ်။
တက္ကစီသမား။ ။ 'သူတို့ပဲ ဦးစီးတာပေါ့နော်။ တခြားကားသမားတွေဆို ဝင်လို့မရဘူး အဝင်မခံတဲ့ သဘောပေါ့၊ ဘယ်လိုပြောမလဲ သူတို့က ဗိုလ်မှူးတွေ ဗိုလ်ကြီးတွေဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ နည်းနည်းတော့ ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ မပြောရဲမဆိုရဲ ဖြစ်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ အတွက် ခုဟာ စားကျက်ပျက်သလို ဖြစ်နေတယ်။'
ယခု ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ ခရီးသည် အဝင် ၂ နေရာစလုံးရဲ့ အငှားယာဉ်လုပ်ငန်းကို ကြီးစိုးထားတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ပါရမီအဖွဲ့လို့ သိရပါတယ်၊ မြန်မာစီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်ပိုင် ဗန္စုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကနေ စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အဖွဲ့ပါ။
ပါရမီအဖွဲ့မှာ ကားအစီးပေါင်း ၃ဝ ခန့်ရှိပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ထဲကို စီးလုံးငှား (၆)ထောင်ကျပ်၊ စုပေါင်းပြီးငှားမယ် ဆိုရင် တယောက် (၃)ထောင် ပုံမှန်ဈေးနှုံးနဲ့ ကားငှားခယူတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။
အလားတူ ရေဝေး သုသာန်နားက အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ကားဂိတ်မှာလည်း စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်ရဲ့ အငှားကားတွေက အပိုင်စားယူပြီး ပြေးဆွဲနေတာကြောင့် ပုဂ္ဂလိက အငှားယာဉ်တွေ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။